ဂယ်ရီ Wilson နှင့်အခြားသူများကို Nicole Prause ၏ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာအနှောင့်အယှက်ပေးခြင်းနှင့်အသရေဖျက်မှု (စာမျက်နှာ 6) - Your Brain On Brain
နိဒါန်း (ကပေါ်အဖြစ် စာမျက်နှာ #1)
ဥပဒေရေးရာအကြံပေးကဤစာမျက်နှာများကိုဖန်တီးရန်အကြံပေးသည်။ ၎င်းသည်နီကိုလော်ပရာ့စ်၏ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်ညစ်ညမ်းစက်မှုလုပ်ငန်းတွင်ဖြစ်ပေါ်နိုင်သောအန္တရာယ်များကိုထောက်ပြသူများအားပစ်မှတ်ထားသည့်ကျယ်ပြန့်သောစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကိုမှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ S ည့်သည်များနှင့်စာနယ်ဇင်းသမားများသည်အမှန်တရားကိုမိမိတို့ဘာသာနားလည်စေရန်ခွင့်ပြုခြင်းဖြင့်အရှက်တကွဲအကျိုးနည်းမှုများကိုရပ်တန့်စေသော“ Sunshine” သည်ရပ်ရွာကိုကာကွယ်သည်။
အခြားသူများ - ၂၀၂၁ Aprilပြီလ - Mindgeek ကိုထောက်ခံသည့်အနေဖြင့် Prause သည် Pornhub ၏ဆိုးရွားသောအလေ့အကျင့်များနှင့်ဖြစ်နိုင်သောရာဇ ၀ တ်မှုများအားစုံစမ်းစစ်ဆေးသည့် Commons Ethics Committee တွင်ရှိသောကနေဒါအမတ်နှစ် ဦး ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။
2021ပြီ ၂၀၂၁ - Twitter အကောင့် @Countscary သည်ဂယ်ရီ Wilson ဖြစ်ကြောင်းမှားယွင်းစွပ်စွဲခဲ့သည်
အခြားသူများ - ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ Aprilပြီလ - Melissa Farmer သည် Prause ၏လိမ်ညာမှုများကိုဖြန့်ဝေပြီးအကုန်အကျခံသောတရားစွဲဆိုမှုအားဖြေရှင်းရန်လိုအပ်သည်
အခြားသူများ - ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ Aprilပြီလ - ထွက်ပေါ်လာသည့် Cry နှင့် Laila Mickelwait တို့က Pornhub ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Feras Antoon ၏မပြီးဆုံးသေးသော Montreal အိမ်ကြီးအားမီးရှို့မှုတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သည်ဟုနီကိုးလ်ပရာ့စ်ကအကြံပြုသည်
အခြားသူများ - ၂၀၂၁ ခုနှစ်Aprilပြီလ - Prause သည် Prause ၏ဥပဒေရေးရာကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ဆုံးသတင်းကိုတင်ပို့ခြင်းအတွက် Rebecca Watson (“ SkepChick”) ကို YouTube နှင့် Patreon တို့အားသတင်းပို့သည်။ YouTube သည် Watson ကိုမှားယွင်းစွာဆင်ဆာဖြတ်သည်.
အခြားသူများ - ၂၀၂၁ မေလ ၇ ရက် - ရေဗက္ကာ Watson သည် Prause ၏ DMCA ကြိုးပမ်းမှု၊ ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်ခြင်းနှင့်အသရေဖျက်မှုဆိုင်ရာဗီဒီယိုများကိုတင်ခဲ့သည်။ Prause သည်အသရေဖျက်မှုဆိုင်ရာ tweets ၃၀ ဖြင့်တုံ့ပြန်သည်။ Patreon နှင့်တိုင်ကြားချက်များကိုတင်ပြသည်၊ Watson သည်အကြမ်းဖက်မှုကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည်ဟုစွပ်စွဲခဲ့သည်.
အခြားသူများ - ၂၀၂၁ ခုနှစ်မေ ၇ ရက်။ အွန်လိုင်းဝေဖန်မှုများကြောင့်စိတ်ပျက်ခြင်း Prause သည်ရေဗက္ကာ Watson ၏ဗွီဒီယိုကို“ debunk” လုပ်ရန်မိနစ် ၂၀ အတွင်း ၁၂ ကြိမ်ရေးရန်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောဆလိုက်တစ်ခုကိုဖန်တီးသည် (Prause မှသူမအောက်တွစ်တွစ်အကောင့်များကိုပိတ်ထားပုံရသည်).
မေလ ၇ ရက်၊ ၂၀၂၁ - Prause သည်ရေဗက္ကာ Watson နှင့်သူမ၏ဗီဒီယိုတွင်ဖော်ပြထားသောအခြားသူများအားတိုက်ခိုက်ရန် alias reddit account (Agreeable-Plane-7) ကိုအသုံးပြုနေသည်။ (Gary Wilson, Nofap).
အခြားသူများ - ၂၀၂၁ မေ၊ Pornhub ၏ပြောင်ပြောင်တင်းတင်းထောက်ခံမှုဖြင့် Prause သည် XBIZ နှင့် The Free Speech Coalition ကိုလူကုန်ကူးမှုနှင့်လူကုန်ကူးမှုတိုက်ဖျက်ရေးတွင် Laila Mickelwait အားကူညီသည်။
မေ ၂၀၂၁ - Prause သည်သူမ၏ Span-Lab.com URL ဟောင်းကိုအသစ်တဖန် ပြန်၍ မပြုလုပ်နိူင်ပါ။ URL သည်လိင်ကစားစရာဆိုင်သို့ပြန်သွားသောအခါ“ ညစ်ညမ်းသောဆန့်ကျင်ရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ” တွင်ပါ ၀ င်နေသည်ဟုမဟုတ်မမှန်စွပ်စွဲကာရဲမဟုတ်သည့်အဖြစ်အပျက်ကိုရဲကသတင်းပို့သည်။
အခြားသူများ - ၂၀၂၁ မေ၊ Prause သည်အကြမ်းဖက်မှုခြိမ်းခြောက်မှုများပြုလုပ်သည့်အတွက်ကုထုံးပညာရှင် Staci Sprout အားသူမအားတွစ်တာသို့အစီရင်ခံရန်မဟုတ်မမှန်စွပ်စွဲခဲ့သည် (Prause က“ ရာဇ ၀ တ်မှုအစီရင်ခံစာ” ဟုမှားယွင်းစွာအမှတ်အသားပြုသည်)
Prause သည်အခြား Pornhub ထောက်ခံသူများနှင့်ပူးပေါင်းခဲ့ပြီး Pornhub ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေသောကော်မတီတွင်ပါ ၀ င်သည့်အဓိကကနေဒါပါလီမန်အမတ်နှစ် ဦး ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ Charlie Angus နှင့် Arnold Viersen လွှတ်တော်အမတ် ၇၀ ကျော်ကလွှတ်တော်အမတ်များသည် Pornhub ၏ကနေဒါပိုင်ရှင်များကိုရာဇ ၀ တ်မှုဖြင့်စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်တောင်းဆိုလိုက်သည် နှင့် The Children of Pornhub - ကနေဒါသည်ဤကုမ္ပဏီအားခေါင်းပုံဖြတ်ခြင်းနှင့်ချေမှုန်းခြင်းဆိုင်ရာဗီဒီယိုများကိုအမြတ်ထုတ်ရန်အဘယ်ကြောင့်ခွင့်ပြုသနည်း။)
ကော်မတီဝင်ချာလီအန်ဂတ်စ်၏ကျယ်ပြန့်သောပို့စ်ကို Arnold Viersen မှ ကိုးကား၍ တွစ်တာရေးသားခြင်းဖြင့်စတင်သည်။ အထဲတွင် Angus ဖော်ပြသည် Vice (ဖြစ်နိုင်ဖွယ်ဘက်လိုက်သည့်သတင်းစာဆရာ Samantha Cole) သည် Pornhub ကိုလျှို့ဝှက်ထောက်ကူပေးသောအဝါရောင်သတင်းစာပညာ၏နောက်ထပ်အပိုင်းတစ်ခုသို့သတင်းမှားများကိုထပ်မံထည့်သွင်းလိုသည်။
ချာလီအန်ဂျူး တွစ်တာအောက်မှာ Vierson ကတော့သူက Pornhub ကိုထောက်ခံသူတွေရဲ့ခြိမ်းခြောက်မှုကိုခံရမှာမဟုတ်ဘူး Vice မီဒီယာ:
စကားမစပ်ငါတင်ပြခဲ့သည် ကနေဒါကျင့်ဝတ်ကော်မတီမှအကျဉ်းချုပ် ငါကိုယ်တိုင် Mindgeek နှင့် Prause နှင့် porn အသုံးပြုမှုနှင့်၎င်း၏ထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောအန္တရာယ်များကိုညွှန်ပြသူအားလုံးဆန့်ကျင်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသောအသရေဖျက်မှုမဲဆွယ်စည်းရုံးရေးအကြားဖြစ်နိုင်သမျှဆက်သွယ်မှုကိုညွှန်ပြ
နောက်ကျော Prause ရဲ့အချည်းနှီးသောတောင်းဆိုမှုများ။ အခြားအမျိုးသမီးပညာရှင် ၆ ဦး သည်ညစ်ညမ်းသောဆန့်ကျင်ရေးအုပ်စုများကိုပစ်မှတ်ထားကြောင်းသူမတွင်သက်သေမရှိပါ။ သူမမှားယွင်းသောပြောဆိုချက်ကိုထောက်ခံသည့်တရားရုံးမှကြေငြာချက်များကိုသူမထောက်ပြနိုင်ပါ။ ငါသူမတင်သွင်းခဲ့သည်အားလုံးတရားရုံးစာရွက်စာတမ်းများရှိသည်အဖြစ်, ငါသေချာဖြစ်၏
သူမသည် tweets Vice hit-piece နှင့်သူမ၏နတ်သမီးပုံပြင်
Samantha Cole သည်အဓိကအားဖြင့် Gab နှင့် TraffickingHub နှင့် NCOSE တို့၏ညစ်ညမ်းသောဆန့်ကျင်ရေးအဖွဲ့အစည်းများအကြားရှိစိတ်ကူးယဉ်ဆက်သွယ်မှုများအပေါ်လုံးလုံးလျားလျားမှီခိုနေရသည်။ Samantha Cole သည်အုပ်စုများကိုသတင်းပို့သည်။ တစ်ခုမှာ Gab တွင်နောက်လိုက် ၂ ယောက်ရှိပြီး ၁၀ ယောက်မှာ ၁၀ ယောက်ဖြစ်သည်။ ထိုနောက်လိုက်များ၏စစ်မှန်မှုမှာမေးခွန်းထုတ်စရာမဟုတ်ပါ။
ထိုအကောင့်များကိုရှာဖွေတွေ့ရှိသူသည် Cole နှင့် Prause နှင့်ဆင်တူသောအနုပညာလက်ရာများကိုထုတ်လုပ်သူသည်လှောင်ပြောင်နေပြီး Pornhub ကိုကာကွယ်ရန်စွဲလမ်းသူဖြစ်သည်။ ထို့အပြင်သူသည်ယခင်ကဆိုရှယ်မီဒီယာတွင်အချက်အလက်အတုဖန်တီးရန်ဝန်ခံခဲ့သည်။ ၎င်းသည် Pornhub သို့မဟုတ်၎င်းအားခွေးရူးပြန်ရောဂါကာကွယ်သူများ၏တန်ပြန်စစ်ဆင်ရေးဖြစ်နိုင်ပါသလား။
သူက Charlie Angus ကို“ တရားရုံးမှထုတ်ပြန်ချက် (၅) ချက်” နှင့်အတူသူမ၏အာရုံကိုလှည့်လိုက်သည်။ အမှန်တကယ်တရားရုံးသို့အမှန်တကယ်သွားရန်တစ်ခုတည်းသောချီးမွမ်းခြင်းအမှုများသည်ကျွန်ုပ်၏အောင်မြင်မှုနှစ်ခုဖြစ်သည်ကိုကျွန်ုပ်အတည်ပြုနိုင်သည်။
Prause ၏ဒုတိယအကြိမ်မြောက်တွစ်တာသည် Exodus Cry အတွက်တင်ထားသောအလုပ်၏မျက်နှာပြင်ပုံဖြစ်သည်။ Exodus Cry သည်အမတ် Angus ထံမှပိုမိုငွေရှာရန်စီစဉ်နေသည်ဟုသူမကဆိုသည်။ ဟမ်လား အဓိပ္ပာယ်မရှိ။
ဤအရာအားလုံးကမေးခွန်းထုတ်စရာဖြစ်သည်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘက်မလိုက်တဲ့သုတေသီတစ်ယောက် (LOL) က Pornhub ကိုကာကွယ်ဖို့ဘာကြောင့်စွဲလမ်းနေတာလဲ။ Prahub ၏ Pornhub အထောက်အပံ့နှင့် ပတ်သက်၍ ပိုမိုသိရှိလိုပါက၊
အခြားသူများ - ၂၀၂၀ ဇန်နဝါရီ။ RealYBOP twitter (Prause) သည် Lorna Mickelwait အားတိုက်ခိုက်သည့် Pornhub ၏အသက်မပြည့်သေးသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများနှင့်အသက်စစ်ဆေးခြင်းမရှိခြင်းအားတိုက်ခိုက်သည်။.
အခြားသူများ - ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေသည် - Prause သည်လူကုန်ကူးခံရသောအမျိုးသမီးများနှင့်ကလေးသူငယ်ညစ်ညမ်းဗီဒီယိုများနှင့်လူကုန်ကူးခံရသည့်အမျိုးသမီးများ၏ဗီဒီယိုများကိုလက်ခံကျင်းပရန်အတွက် Pornhub ကိုတာဝန်ယူရန် TraffickingHub လှုပ်ရှားမှုကိုစတင်ပြီးနောက် Laila Mickelwait အား @BrainOnPorn နှင့် @NicoleRPrause ကို သုံး၍ Laila Mickelwait ကိုအသုံးပြုသည်။ Prause သည် Laila အားသေမင်းခြိမ်းခြောက်မှုများကိုပံ့ပိုးပေးသည်ဟုမဟုတ်မမှန်စွပ်စွဲသည်.
အခြားသူများ - ၂၀၂၁ မတ်လ - Laila Mickelwait ၏ကလေးငယ်ကိုပစ်မှတ်ထားမှုအဖြစ်ချီးကျူးပြောဆိုသည်။
Prause ကသူမကိုကျွန်ုပ်အားပြစ်တင်ဝေဖန်သည့်မည်သည့်အမည်မသိအကောင့်ကိုစွပ်စွဲနေပုံရသည်။ သူမမှာပင်တွစ်တာအကောင့် ၂၄ ခုနှင့်သူမအားအမြတ်ထုတ်ရန်ရည်ရွယ်ထားသည့်ဝက်ဘ်ဆိုက် ၈ ခုရှိသည်ဟုပင်ဆိုခဲ့သည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊
မုသားအားလုံးတစ် pack ကို။
သူမ၏နောက်ဆုံးလိမ်ညာမှုတွင် Prause ကကျွန်ုပ်သည် @ Countscary1 ဖြစ်ကြောင်းပြတ်ပြတ်သားသားဖော်ပြသည်။
အမှန်စင်စစ်၊ Prause သည်နာမည်ပေါင်း ၂၀၀ ကျော်ရှိသည့် trolls ဖြစ်သည် ဖြစ်နိုင်ခြေနီကိုးလ် Prause alias ကိုမှတ်တမ်းတင် PDF ကို။ ဒီမှာသူမနှင့်ပတ်သက်။ နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်ပါပဲ သူမ၏အကျင့်ပျက်နောက်ခံလူ ဝီကီပီးဒီးယားတွင်သူမ၏ sockpuppets များမှအမြတ်ထုတ်ခြင်း - နီကိုးလ် Prause အတွက်မှတ်တိုင်တစ်ခုလား။ သိသာသော sockpuppets ၅၀ ကျော်သည်သူမ၏ဘက်လိုက်မှု၊ မုသားနှင့်အသရေဖျက်မှုတို့ဖြင့်ဝီကီပီးဒီးယားကိုတည်းဖြတ်သည်။
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ ဇူလိုင်လတွင် Prause သည်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် Melissa Farmer PhD အားရှေ့နေ Aaron Minc နှင့် ပတ်သက်၍ သူမ၏အသရေဖျက်မှုပြန့်ပွားစေရန်ကူညီပေးခဲ့ပုံရသည်။ Minc ၏ကုမ္ပဏီသည် Alexander Rhodes အား Prause အားတရားစွဲဆိုမှုတွင်ကိုယ်စားပြုနေပြီးအခြားရှေ့နေတစ် ဦး မှာ Rhodes (Minc မဟုတ်) ကိုကိုယ်စားပြုသည်။ Minc တစ်ခုတည်းမှာပဲ Twitter အကောင့်ရှိတယ်။ ၎င်းသည် Prause သည် Minc အားလူသိရှင်ကြားပစ်မှတ်ထားခြင်းမှာ Minc သည် Prause ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကို“ နှစ်ပေါင်းများစွာသတ်ဖြတ်ရန်ခြိမ်းခြောက်နေသောသူများ” သို့ပေးပို့ခဲ့သည်ဟုဆိုကာရိုင်းပင်းကူညီသော၊
အတိုချုပ်ဆိုရလျှင် Melissa Farmer နှင့်သူမ၏ရှေ့နေများသည် Minc နှင့်ပတ်သက်သောသူမအပေါ်အထင်လွဲမှားမှုများကိုခုခံကာကွယ်ရန်အကြောင်းပြချက်မပေးနိုင်ပါ။ လယ်သမားကဒီအချက်ကိုဝန်ခံခဲ့ပြီးသူမရဲ့ရှုံးနိမ့်မှုကိုလက်ခံပြီးထွက်သွားခဲ့တယ်။ ဤသည်ကသူမ၏လက်မခံနိုင်သောအပြုအမူ၏ဂယက်ရိုက်ခတ်မှုများကိုရင်ဆိုင်ရန် Prause ကိုချန်ထားခဲ့သည်။ သို့သော် Farmer သည် Prause ၏အန္တရာယ်ရှိသော smear ကင်ပိန်းသို့ ၀ င်ရောက်ခြင်းကြောင့်တရားစွဲဆိုမှု၏ဖိစီးမှု၊
တစ်ဖန် ထပ်မံ၍ Prause ၏လိမ်လည်မှုကိုဖြန့်ဝေခြင်းသည်လှည့်စားသူများအတွက်ကြီးမားသောဂယက်ရိုက်ခတ်မှုများရှိသည်ဟုထင်ရှားသည်။ နောက်ဥပမာတစ်ခု Alex Rhodes & NoFap အကြောင်း Nicole Prause ၏လိမ်လည်မှုကိုထုတ်ဝေရန်အတွက်တောင်းပန်ရန်နှင့်အကြီးအကျယ်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများကိုပေးရန် ScramNews မှမီဒီယာထုတ်လွှင့်မှု.
14ပြီလ ၁၄ ရက်၊ နောက်ဆုံးအစီရင်ခံစာအတွက်လျှောက်ထားရန်လှုံ့ဆော်မှု:
စာမျက်နှာ ၆ - လယ်သမား၏ပြန်လည်ဆွဲယူမှုကို Puse ဟုအမည်ပေးသည်
Montreal ရှိ Pornhub ၏အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Feras Antoon သံသယဖြစ်ဖွယ်မီးရှို့ဖျက်ဆီးအတွက်မီးရှို့ကြ၏ ဒေါ်လာ ၁၅.၉ သန်းဖြင့်စျေးကွက်ထဲသို့မပြီးဆုံးသေးသောပစ္စည်းကိုတင်ပြီးသီတင်းပတ်အနည်းငယ်အကြာတွင်ဖြစ်သည်။ The Daily Mail ကမှတ်ချက်ချသည် ကြောင်း:
ရာဇ ၀ တ်သားများစွာနေထိုင်သည့် Montreal ၏ Mafia Row ကိုပိုင်ဆိုင်သည်။ Antoon ၏အိမ်ဆောက်နေသည့်နေရာ၌ပင်သေနတ်သမားတစ် ဦး သည်ရပ်တန့်ကာဒုံးကျည်နှစ်ချက်ပါသောပြတင်းပေါက်တစ်ခုမှကျည်ဆံတစ်ရွက်ကိုပစ်ခတ်ကာ ၂ ဝ ၁ ဝပြည့်နှစ်တွင်သူ၏မီးဖိုချောင်တွင်“ ကနေဒါခေါင်းကိုင်ရဲတိုက်” Nicolo Rizzuto ကိုသတ်ဖြတ်ခဲ့သည်။
“ ဒီနေရာဟာလူတွေရဲ့နေထိုင်ရာနေရာတစ်ခုလို့လူသိများတဲ့ဒေသတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကိုတရား ၀ င်တရားဝင်ဖြစ်အောင်မလုပ်ခဲ့ဘူး” လို့ DailyMail.com ၀ က်ဘ်ဆိုက်ကိုပြီးခဲ့သည့်နှစ်က ၀ င်ရောက်ကြည့်ရှုခဲ့သည့်မွန်ထရီရယ်လ်၏ရှည်လျားသောအချိန်ကာလတစ်ခုကပြောကြားခဲ့သည်။ မြို့ထဲကတစ်ယောက်ယောက်ကိုဒီဒေသအကြောင်းမေးမြန်းပြီး 'အိုး၊ မာဖီဗီးလ်' လို့သူတို့ပြောလိမ့်မယ်။
ရာဇ ၀ တ်မှုသို့မဟုတ်တရားမ ၀ င်သောလှုပ်ရှားမှုများစာရင်းကိုမီးရှို့ရန်စွပ်စွဲချက်များထည့်သွင်းရန်အချိန်ကြာမြင့်စွာမပြုခဲ့ပါ သူမ Laila Mickelwait ကိုကျူးလွန်သည်ဟုမှားယွင်းစွပ်စွဲခဲ့သည်.
Prause သည် cyberstalks Mickelwait သည်သူမပြုလုပ်ခဲ့သည့်အရာများကိုမဟုတ်မမှန်စွပ်စွဲပြောဆိုခဲ့သည်။ Prause က Mindgeek ကိုကလေးညစ်ညမ်းဗီဒီယိုများနှင့်မုဒိမ်းကျင့်သောဗွီဒီယိုများကိုငွေကြေးအမြောက်အမြားထုတ်လုပ်ရန်အပြည့်အစုံသွားနိုင်သည်။ ဒါဘာတွေဖြစ်နေတာလဲ။ အိုဟုတ်တာပေါ့။
အံ့သြဖွယ်တိုက်ဆိုင်မှုအစီအစဉ် - မောင်းနှင်ထားသော Wikipedia တည်းဖြတ်ရေးနှင့် Prause ၌ sockpuppet ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး Tgeorgescu တင်ပါတယ် Wikipedia ၏စာမျက်နှာ Nofap နှင့် နီကိုးလ် Prause ဆွေးနွေးချက်စာမျက်နှာ အဲလက်စ်ရော့ဒ်စ်နဲ့ကျွန်တော်မီးနောက်ကွယ်မှာရှိနေမှာပါ။ သူကဒီစာမျက်နှာနှစ်ခုလုံးမှာတင်တယ်။
Montreal ရဲတပ်ဖွဲ့သည် NoFap နှင့် YBOP တို့နှင့်ဆက်စပ်မှုရှိနိုင်သည့်မီးရှို့မှုအားစုံစမ်းစစ်ဆေးနေသည့်အတွက်ဤဆိုဒ်များသည်ကနေဒါရဲများ၏စစ်ဆေးမှုအောက်သို့ရောက်လိမ့်မည်။ အိမ်နီးချင်းများကိုအန္တရာယ်ပြုနိုင်သဖြင့်လူသတ်မှုစွဲချက်ကိုအလွယ်တကူအဆင့်မြှင့်နိုင်သည်။ အပြစ်မဲ့တတိယပါတီများ၏ဘဝသည်အန္တရာယ်ရှိသည် Tgeorgescu (စကားပွော) 09:43, 28 Aprilပြီ 2021 (UTC) ။
အခြားသူများ - ၂၀၂၁ ခုနှစ်26ပြီ ၂၆ ရက် - Prause သည် Prause ၏ဥပဒေရေးရာကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ဆုံးသတင်းကိုတင်ပို့ခြင်းအတွက် Rebecca Watson (“ SkepChick”) ကို YouTube နှင့် Patreon တို့အားသတင်းပို့သည်။ YouTube သည် Watson ကိုမှားယွင်းစွာဆင်ဆာဖြတ်သည်။
၂၀၁၉ နို ၀ င်ဘာလတွင်ရေဗက္ကာ Watson ကတင်ပြခဲ့သည် ဗီဒီယိုတစ်ကားကို အဲလက်စ်ရော့ဒ်စ်၏အသရေဖျက်မှုဆိုင်ရာတရားစွဲဆိုမှုအားခေတ္တမျှဖော်ပြခြင်း။ Watson ၏ဗီဒီယိုသည် Rhodes (သို့) ကျွန်ုပ်ကို (Gary Wilson) နှင့်လုံးဝမသက်ဆိုင်ပါ။ သို့သော် Watson ၏အမှန်တရားကိုဖော်ထုတ်ပြသရန် Prause ကအဆင်သင့်မဖြစ်သေးပါ။ ကြည့်ပါ ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ နို ၀ င်ဘာလ၊ Prause သည်သတင်းစာဆရာ Rebecca Watson (“ skepchicks”) အားတိုက်ခိုက်ပြီးသူမသည်ဗီဒီယိုတွင် Prause ကိုဆန့်ကျင်သော Alex Rhodes အသရေဖျက်မှုဆိုင်ရာတရားစွဲဆိုမှုအားလိမ်လည်ပြောဆိုခဲ့သည်။.
၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ 22ပြီလ ၂၂ ရက်တွင် Watson သည်သူ၏မိတ္တူတစ်ချောင်းတွင်မိနစ် ၂ မိနစ် update ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ (နောက်ထပ်ဆမ်ပယ်ရီ၏“ ဘာသာတရားသည်ညစ်ညမ်းမှုပြproblemsနာများ၏အကြောင်းရင်း” ၌အံ့အားသင့်စရာဖြစ်ခဲ့သည်)
၏ "update ကိုအပိုင်း" ၏မှတ်တမ်း Watson's 2021 ဗီဒီယို (လောလောဆယ်ပုဂ္ဂလိကအဖြစ်တံဆိပ်ကပ်ထားသည်):
NoFap ကိုတည်ထောင်သူ Alexander Rhodes သည်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအတွက်လူမှုရေးဆိုင်ရာအမှန်တကယ်အန္တရာယ်မရှိကြောင်းရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည့်သုတေသီများစွာအနက်မှ neuros သိပ္ပံပညာရှင် Nicole Prause အားတရားစွဲဆိုခဲ့သည်ကိုယခင်ဗွီဒီယိုတွင်နောက်ထပ်တွေ့ရှိချက်အသစ်တစ်ခုကျွန်ုပ်တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ဤအရာသည်သိပ္ပံပညာဆန့်ကျင်သောဆင်ဆာဖြတ်တောက်မှုဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်ကန ဦး တုံ့ပြန်မှုပြုသော်လည်းသုတေသနများအလွန်ပြုလုပ်ပြီးနောက် Prause သည် BONKERS ဖြစ်ပြီး Rhodes အားအမှန်တရားကိုဆန့်ကျင်သူနှင့်မှားယွင်းသည်ဟုမှားယွင်းစွပ်စွဲခြင်းဖြင့်မှားယွင်းစွာစွပ်စွဲခြင်းဖြင့်အဆုံးသတ်ခဲ့သည် အလေးအနက်ထား, ဒါဟာကြီးမားတဲ့ရှုပ်ထွေးခဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်သွားပါ။
ထိုဗီဒီယိုမှ စ၍ Prause ကသူတို့ကိုရှုတ်ချသည်ဟုစွပ်စွဲသူများနှင့်သူမအနှောင့်အယှက်ပေးနေသည်ဟုသူမဆိုသော porn-anti ဆန့်ကျင်သူများအားအမိန့်များတားမြစ်ရန်ကြိုးစားနေခြင်းကြောင့်အခြားတရားစွဲဆိုမှုများစွာရှိခဲ့သည်။ ကောင်းပြီ၊ တရားရုံးများသည် Prause နှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်နှင့်သဘောတူပုံရသည်၊ အကြောင်းမှာအနည်းဆုံးယခုအချိန်အထိရှိနေသောကြောင့်ဖြစ်သည် တရားမ ၀ င်တရားစွဲဆိုမှုများကိုတင်သွင်းခြင်းအတွက်သူမအားအသရေဖျက်မှုနှင့် SLAPP ဆန့်ကျင်ရေးလုပ်ရပ်များအတွက်သူမကိုစီရင်ချက်ချခဲ့သည်။ သူမသည်ဒေဝါလီခံကြောင်းကြေငြာခဲ့ပြီးတွစ်တာမှဆိုင်းငံ့ခံခဲ့ရသည်။ Scram News, Prause ၏အနှောင့်အယှက်ပေးမှုစွပ်စွဲချက်များကိုထုတ်ဝေသည့်ဘလော့ဂ်တစ်ခု၊ တောင်းပန်ရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခဲ့သည်, တရားဝင်အခကြေးငွေပေးဆောင်နှင့်လည်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းထဲကသွားလေ၏။ Yikes ။
Cue တွင်, Prause သည်လိမ်လည်လှည့်ဖျားနေသောတွစ်တာဒေါသထွက်ခဲ့ပြီး Watson ကို Patreon နှင့် YouTube တို့အားသတင်းပို့သည်။
သူသည် Twitter မှခေတ္တဆိုင်းငံ့ခြင်း၊ တရားစွဲဆိုမှုလုံးဝမရှုပ်ထွေးခြင်းဟုမှားယွင်းစွာစွပ်စွဲကာမှားယွင်းသောစွပ်စွဲချက်ကြီးများဖြင့်စတင်ခဲ့သည်။
သူမသည်ကျွန်ုပ်အားတရားစွဲဆိုမှု ၂ ခုဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးသူမ၏လမ်းစဉ်ကိုမလိုက်နာသောအခြားဥပဒေရေးရာလုပ်ဆောင်မှုများတွင်ပါ ၀ င်ခဲ့သည်။ အမှတ်စဉ်အနှောက်အယှက်ပေးသူ / အသရေဖျက်မှုအပေါ်ဥပဒေရေးရာအောင်ပွဲများနီကိုးလ်ပရာ့စ် - သူမသည်ကျူးလွန်ခံရသူမဟုတ်ဘဲကျူးလွန်သူဖြစ်သည်! တွစ်တာအတွက်မူသူမ၏အကောင့် (၂) ခုသည်နှောင့်ယှက်မှုအတွက်အမြဲတမ်းတားမြစ်ထားပြီးအနည်းဆုံး ၂ ကြိမ်တွင်သူမ၏လက်ရှိအကောင့်ကိုအလွဲသုံးစားမှုအတွက်ယာယီပိတ်ပင်ထားသည်။
အောက်တိုဘာလ 2015: Prause ရဲ့မူလတွစ်တာအကောင့်ကိုအပြီးတိုင်နှောင့်ယှက်ဘို့ဆိုင်းငံ့ထား
မတ်လ ၁၂၊ ၂၀၁၈– Prause ၏ Liberos Twitter အကောင့် (NicoleRPrause) သည်ဂယ်ရီ Wilson ၏ပုဂ္ဂလိကသတင်းအချက်အလက်များကိုတွစ်တာစည်းကမ်းများကိုချိုးဖောက်ခြင်းအတွက်ဆိုင်းငံ့ထားသည်။
အောက်တိုဘာ ၂၃ ရက်၊ ၂၀၂၀ - Prause ၏ညစ်ညမ်းသောစက်မှုလုပ်ငန်းမှတွစ်တာအကောင့် (@BrainOnPorn) သည်ပစ်မှတ်ထားနှောက်ယှက်ခြင်းနှင့်အလွဲသုံးစားမှုအတွက်အမြဲတားမြစ်ထားသည်။.
မတ် ၂၀၂၁ - နီကိုးလ်ပရာ့စ်၏တွစ်တာအကောင့် (@NicoleRPrause) အား“ အကြမ်းဖက်ခြိမ်းခြောက်မှုများတင်ခြင်း” အတွက်ယာယီရပ်ဆိုင်းခဲ့သည်
နောက်တစ်ကြိမ် Prause ၏တွစ်တာတွင်ရယ်မောဖွယ်ကောင်းသော Watson သည်ညစ်ညမ်းသောသူရဲကောင်းများရှိသည်ဟုပြုံးရယ်သည်။ “ မှားယွင်းသောရာဇ ၀ တ်မှုအစီရင်ခံစာများ” ကိုတွစ်တာသို့ပို့ခဲ့သည်ဟုလည်းမှားယွင်းစွာပြောဆိုသည်။
သူမ၏တတိယမြောက်တွစ်တာတွင် Prause က Watson ၏ပြောဆိုချက်ကိုမှားယွင်းစွာဖော်ပြခဲ့သည်။ 'tသူကသူနဲ့သူမကိုသူမနဲ့ပတ်သက်ပြီး“ သဘောတူ” ခဲ့တယ်၊ ငါ ScramNews နဲ့တရားရင်ဆိုင်နေရတယ်) ':
Watson သည် Prause သည် SCRAM သတင်းနှင့်အငြင်းပွားနေသည်ဟုဘယ်သောအခါမျှမပြောကြားခဲ့ပါ။
Scram News, Prause ၏အနှောင့်အယှက်ပေးမှုစွပ်စွဲချက်များကိုထုတ်ဝေသည့်ဘလော့ဂ်တစ်ခု၊ တောင်းပန်ရန်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခဲ့သည်, တရားဝင်အခကြေးငွေပေးဆောင်နှင့်လည်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းထဲကသွားလေ၏။ Yikes ။
Watson ကမှန်ပါတယ် သတင်းများ စီးပွားရေးမှထွက်သွား၏ ၎င်းသည် Prause ၏အသရေဖျက်မှုဆိုင်ရာမုသားများကိုပုံနှိပ်သောကြောင့်သိသိသာသာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုများကိုပေးဆပ်ခဲ့ရသည်။
တစ်ပြိုင်နက်တည်းမှာပဲ၊ Prause သည်နောက်ထပ်ဖြည့်စွက်ချက် ၄ ခုနှင့် Watson အောက်တွင်ရေးသားသည်။
ငါ 2020 ခုနှစ်တွင် Prause ဆန့်ကျင်ဖြောင့် -up, SLAPP လှုပ်ရှားမှုအနိုင်ရနှင့် 2021 ခုနှစ်တွင်ငါကုန်ကျစရိတ်များနှင့်တစ် ဦး ပြစ်ဒဏ်နှင့်အတူသူမ၏ဆန့်ကျင်တောင်းဆိုမှုများသေးငယ်တဲ့အမှု၌အနိုင်ရရှိခဲ့သည်။ သူမသည်လုပ်ရပ်နှစ်ခုလုံးဆောင်ခဲ့လေ၏။
“ အသရေဖျက်မှုရှာဖွေခြင်း” ကဲ့သို့သောအရာမရှိပါ။ ထို့ကြောင့် Prause ကဤစာပိုဒ်ကိုရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ပါတီသုံးခုကသူမသည်မရိုးသားသော၊ ဘဝကိုဖျက်ဆီးနေသော smear လှုပ်ရှားမှုများအားတုံ့ပြန်ခြင်းဖြင့် Prause အားအသရေဖျက်မှုဖြင့်တရားစွဲဆိုထားသည်။ Donald L. ဟီလ်တန်, အလက်ဇန်းဒါး Rhodes, အာရုန်သည်အမ် Minc။ ပထမ ဦး ဆုံးအမှု ၂ ခုသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်အစောပိုင်းတွင်တတိယမြောက်ဖြစ်သည် လတ်တလောအသရေဖျက်မှုတရားစွဲဆိုမှု အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်တွင်တရားစွဲခံရသည်။ Prause ၏တွဲဖက်တရားခံ (Melissa Farmer PhD) သည်အခြေချပြီးလူသိရှင်ကြားသူမက Prause ၏အသရေဖျက်မှုလိမ်ညာမှုမှန်သည်ဟုထင်မြင်ရန်အကြောင်းပြချက်မရှိဟုဝန်ခံခဲ့သည်
“ ဘာမှမပေးဆပ်ရဘူး” ဟုသူကပြောသည်။ စည်းကမ်းချက်များကိုထုတ်ဖော်မပြသော်လည်း၊ Prause ၏အာမခံပေးသူထံမှငွေပေးချေမှုအားဖြင့်အခြေချမှုများကိုပြုလုပ်နိုင်သည်ဟုခန့်မှန်းရန်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပါသည်။ (တရားရုံးစာရွက်စာတမ်းများ ရန်ပုံငွေများကိုလွှဲပြောင်းခဲ့ထုတ်ဖေါ်) ။
ကျွန်ုပ်သည် Prause ၏တရားစွဲဆိုမှုများအားလုံးရှိသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်သည်နှိပ်စက်ခံရသည့်အမျိုးသမီးသိပ္ပံပညာရှင် ၈ ဦး အားဖော်ပြသည့်အများပြည်သူဆိုင်ရာစာရွက်စာတမ်းများမရှိကြောင်းအတည်ပြုနိုင်သည်။ ငါသူမကိုနှောင့်ယှက်သည်ဟုပြောဆိုသော“ ပညာရပ်ဆိုင်ရာ” တစ်ခုမှာ Prause - နှင့်ငါ့ဖြစ်သည် SLAPP ဆန့်ကျင်ရေးအောင်ပွဲ သက်သေပြ သူမ လိမ်နေတယ် နှောင့်ယှက်မှုကြောင့်ပြောင်းရွှေ့ရန်လိုအပ်ခြင်း၊ တရားရုံးစာရွက်စာတမ်းများထုတ်ဖေါ် Prause လည်းဒီအကြောင်းလိမ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သူမ၏စွပ်စွဲတိုက်ခိုက်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ Prause ကသူမစွပ်စွဲခံရသည်ဟုစွပ်စွဲခဲ့သည် YBOP ပေါ်တွင်တင်ထားသောလိပ်စာတစ်ခုတွင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည် (သူမ၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိပ်စာများသည် YBOP တွင်တစ်ခါမျှမဖြစ်ခဲ့သကဲ့သို့):
၂၀၂၁၊ ဖေဖော်ဝါရီ၊ Prause က ၅ ရက်အတွင်း tweets ၇၀ ကိုတင်ပြီးသူမ၏လိပ်စာကို YBOP တွင်တင်ခဲ့သည်ဟုမှားယွင်းစွာပြောခဲ့သည် - သူမသည် 2021 ခုနှစ်တွင်လမ်းပေါ်တွင်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည်။ သို့သျောလညျး ၂၀၂၀ တွင် Prause ကကျွန်ုပ်အပါအ ၀ င်မည်သူမျှသူမ၏လိပ်စာအစစ်အမှန်မရှိကြောင်း Tweet လုပ်ခဲ့ သူ၏လိမ်ညာမှုများနှင့်မကိုက်ညီပါ (မှတ်တမ်းမှတ်ရာများ ၅ ရက်ကျော်လွန်ပြီးစာတင်သည်).
၂၀၂၁၊ ဖေဖော်ဝါရီ၊ Prause ကသူမမအောင်မြင်သည့်တရားစွဲဆိုမှုမှပြကွက် ၅ ကသူမ၏လိပ်စာကို YBOP တွင်တင်ကြောင်းသက်သေပြခဲ့သည်။ ငါ Prause လိမ်နေသည်သက်သေပြပြပွဲ 2021 ၏မျက်နှာပြင်ပုံတစ်ပုံကို tweet.
သူမ၏တတိယနှင့် ၄ ကြိမ်မြောက် tweets များတွင် Prause ကအမည်မဖော်ထားသောအင်တာနက်က troll များ၏မှတ်ချက်များကိုသူမ၏ဆလိုက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ Watson သည် Prause ၏သုတေသနနှင့် ပတ်သက်၍ လိမ်ပြောနေသည် (Watson က Prause ၏သုတေသနကိုမည်သည့်အခါမျှဖော်ပြခြင်းမရှိ)၊ အကြမ်းဖက်ခြိမ်းခြောက်မှုများကိုလှုံ့ဆော်နေသည်။ (Absurd!) Prause လောက၌မည်သည့်ဝေဖန်မှုကမဆိုသေခြင်းတရားကိုခြိမ်းခြောက်သည် (ဥပဒေစိုးမိုးရေးသည်ဤကိစ္စအပေါ်အမြဲတမ်းလုပ်ကိုင်နေသည်။ ) Wra ကသူမကိုရှုတ်ချသည်ဟုမှားယွင်းစွာစွပ်စွဲခဲ့သည်။
Prause သည်“ @PornPanic” ၏ညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းသောညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံများကိုမြင်တွေ့ရသည်။
အချိန်တိုအတွင်းရေဗက္ကာ Watson ရဲ့ 2019 ကဗီဒီယို ဖယ်ရှားသည်, Prause ကဆန့်ကျင်တဲ့ DMCA ပြောဆိုချက်ကိုတင်သွင်းကြောင်းမှတ်စုတစ်ခုနှင့်အတူ:
Watson သည်သူမ၏“ ခိုးယူထားသောဓာတ်ပုံများ” ကိုသုံးသော်လည်းဓာတ်ပုံတစ်ပုံအောက်တွင်ကျသင့်ပြီဟုဝါကြွားနေသည် မျှတသောအသုံးပြုမှုအယူဝါဒ ဒီအခြေအနေမှာ။
သူမကတရားစွဲဆိုမှုဘယ်တော့မှမဆုံးရှုံးခဲ့ဟုဆိုသည်။ ဒါပေမယ့်သူမမှာ တစ်ခုထက်ပိုသော!
အခြားသူများ - ၂၀၂၁ မေလ ၇ ရက် - ရေဗက္ကာ Watson သည် Prause ၏ DMCA ကြိုးပမ်းမှု၊ ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်ခြင်းနှင့်အသရေဖျက်မှုဆိုင်ရာဗီဒီယိုများကိုတင်ခဲ့သည်။ Prause သည်အသရေဖျက်မှုဆိုင်ရာ tweets ၃၀ ဖြင့်တုံ့ပြန်သည်။ Patreon နှင့်တိုင်ကြားချက်များကို; Watson သည်အကြမ်းဖက်မှုကိုလှုံ့ဆော်ပေးသည်ဟုစွပ်စွဲခဲ့သည်။
Watson's ၏ ၁၈ မိနစ်ကြာမှတ်တမ်းတင်ခြင်းကအရှက်ကွဲစေသောလုပ်ရပ်များ (မှတ်တမ်းကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်) Skepchick site ပေါ်တွင်ရရှိနိုင်ပါ).
ဤစာမူတွင်သင်လုပ်နိုင်သောဗွီဒီယိုတစ်ခုပါရှိသည် ဒီမှာကြည့်ပါ။ ဤကဲ့သို့သောဗွီဒီယိုများကိုထောက်ခံရန်၊ သို့ ဦး တည်ပါ patreon.com/rebecca!
မင်္ဂလာပါ YouTube ။ ငါရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်! မကြာသေးမီကအလွန်အရေးကြီးသောအရာတစ်ခုကိုကျွန်တော်သင်ယူခဲ့ဖူးသည်။ သင်သိ, အ doobly Doo ။ ဒီတော့ဒီအချက်ကိုစိတ်ထဲထားပြီး၊ ငါဟာအရေးကြီးတဲ့အရာအားလုံးကိုဒီနေရာမှာ၊ ဗီဒီယိုမှာတင်မယ်။ တက်ခေါက်။
ပထမ ဦး ဆုံးအနေနဲ့၊ ကျွန်ုပ်၏ဗီဒီယိုများအားလုံးသည်သက်ဆိုင်ရာလေ့လာမှုများ၊ ဆောင်းပါးများ၊ တွစ်တာများနှင့်အခြားအရာများနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့်မှတ်တမ်းတင်စာရွက်စာတမ်းများပါလာသည်ကိုသင်သိပါသလား။ အဲဒါအမှန်ပါပဲ! မင်းရဲ့မှတ်တမ်းတွေကိုမင်းအပေါ်မှာတွေ့နိုင်တယ် Patreon သို့မဟုတ်အပေါ် epရာဝတီ။ သင်လုပ်ချင်တဲ့အရာဆိုရင်သင်ယူဖို့နည်းလမ်းများစွာရှိပြီးငါ့ကိုထောက်ပံ့ဖို့လည်းလိုတယ်။ မှတ်ချက်ပေးတာ၊ မှတ်ပုံတင်တာတွေလုပ်တာ၊ ဝေမျှတာတွေကကျွန်တော့်ကိုအထောက်အကူပြုနိုင်တဲ့နောက်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပေမဲ့အဲဒီလိုလုပ်နေသူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ဒုတိယအချက်အနေဖြင့်၊ ကျွန်ုပ်၏လိုင်းပေါ်၌မကြာမီကပေါ်ထွက်လာသော၊ ပျောက်ကွယ်သွားသော၊ ပြန်လည်ပေါ်ထွက်လာသောဗီဒီယိုအချို့ကိုသင်သတိပြုမိကောင်းမြင်မိလိမ့်မည်၊ ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်ရှင်းပြပြီးသွားပြီ၊ ဗွီဒီယိုတွေရဲ့ဖော်ပြချက်မှာရှင်းပြတာမှားခဲ့တယ်။ ပြီးတော့သင်တို့အားလုံးမှတ်ချက်ပေးတဲ့ -“ ဒီအသံကစုပ်တယ်!” “ ဒီဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်မမြင်ဖူးဘူးလား” “ ဟေး၊ မေမေ၊ နိုဝင်ဘာမဟုတ်ဘူး!” အစပိုင်းမှာတော့ငါစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါကအဲ့ဒီဖော်ပြချက်ကိုအမြဲတမ်းဖတ်ခဲ့ဖူးတယ်၊ အမှတ်မရှိပါ။ ဒါကြောင့်ငါငါ့အမျက်ဒေါသကိုပယ်ဖျက်။ အားလုံးကောင်းပါတယ် ဘာတွေဖြစ်နေတာလဲဆိုတာငါ့ကိုရှင်းပြခွင့်ပေးပါ။
၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ နို ၀ င်ဘာလတွင် Waaay မှကျွန်တော်သည်သိရပြီး porn anti-masturbation anti-masturbation anti-porn အဖွဲ့ကိုတည်ထောင်သူ Andrew Rhodes သည်ညစ်ညမ်းသောသိပ္ပံပညာရှင်နီကိုးလ်ပရာ့စ်အားအသရေဖျက်မှုအတွက်တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ ငါကမကြာခဏဆိုသလိုသရေဖျက်မှုဥပဒေကိုသုံးပြီးလူတွေကိုသူတို့ရဲ့ဝေဖန်သူတွေကိုတိတ်ဆိတ်စွာနေဖို့ကြောက်ကြတယ်။ ဒါကြောင့် Prause ကိုခုခံကာကွယ်ဖို့ငါအဆင်သင့်ပဲ၊ ဒီသုတေသနဟာတရားဝင်တယ်လို့ငါထင်ပြီးလက်ရှိသိပ္ပံနည်းကျသဘောတူညီမှုနဲ့အညီညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေဟာစွဲစွဲလမ်းလမ်းမရှိ၊ အဲဒါကိုစောင့်ကြည့်သူတစ် ဦး ချင်းစီမှမူလကပင်အန္တရာယ်။
ဒါပေမယ့်တရားရုံးကအမှုမှာတင်ပြတဲ့အထောက်အထားတွေကိုငါကြည့်လိုက်တဲ့အခါငါဟာဒါဖြစ်တယ်လို့ကောက်ချက်ချခဲ့တယ် မဟုတ် သိပ္ပံပညာရှင်တိတ်ဆိတ်စွာတရားစွဲဆိုဖို့အသရေဖျက်မှုငိုတဲ့ pseudoscientist ၏ရှင်းရှင်းလင်းလင်း - အမှု။ ကျွန်ုပ်သည်ရှေ့နေမဟုတ်သော်လည်း၊ Rhodes တွင်ခိုင်လုံသောအမှုရှိနိုင်သည်ဟုထင်ရပါသည်။ ဒါဟာတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပြီးသင်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသိလိုလျှင်၊ သွားကြည့်ပါ ဦး.
ထိုအခါ ယခုနှစ်Aprilပြီလတွင် ညစ်ညမ်းမှုကိုတားမြစ်ရန်လူအများစုက "သိပ္ပံ" ကိုမည်သို့ငြင်းခုံနိုင်ကြောင်းလေ့လာမှုအသစ်တစ်ခုကိုကျွန်ုပ်ဖတ်ခဲ့သည်။ အမှန်မှာ၎င်းတို့သည်မိမိတို့၏ကိုယ်ကျင့်တရားဆိုင်ရာကန့်ကွက်မှုများကိုပံ့ပိုးရန်အချက်အလက်များကိုချယ်လှယ်နေသည့်ဘာသာရေးအခြေခံဝါဒီများဖြစ်သည်။ ဒီသင်တန်းကဒီဟာကလောကီ NoFap အဖွဲ့ကိုသတိရစေတယ်။ ဒါကြောင့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်ကတည်းကတရားရုံးကအမှုဖြေရှင်းမှုရှိ၊ မရှိဆုံးဖြတ်နိုင်ခဲ့တယ်။ ဒီကိစ္စဟာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲသာမကဘဲတရားစွဲဆိုမှုတွေ၊ နှင့်ထို့နောက်အမျိုးမျိုးသောလိုက်တယ်။ ဒါကြောင့်ငါကလေ့လာမှုအသစ်အကြောင်းအများစုပြောခဲ့သည့်အခြားဗီဒီယိုတစ်ခုကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီး NoFap / Prause updates များကိုလည်းခေတ္တမျှဖော်ပြခဲ့သည်။
ဒါကအရာတွေတကယ်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့အချိန်ပါပဲ။ အဲဒီဗီဒီယိုတိုက်ရိုက်လွှင့်သွားပြီးမကြာခင်မှာပဲ YouTube ကဒီဗီဒီယိုနှစ်ခုကိုတင်ထားတဲ့ DMCA စွန့်စားခန်းအချို့ရှိတယ်လို့ငါ့ကိုအသိပေးခဲ့တယ်။ သူတို့ကိုတင်သွင်းသူမှာနီကိုးလ်ပရာ့စ်ဖြစ်ပြီး၊ ကျွန်ုပ်သည်သူမဗီဒီယိုတစ်ခုချင်းစီတွင်သူမအားပထမ ဦး ဆုံးဖော်ပြခဲ့သည့်အခါကျွန်ုပ်သည်မျက်နှာပြင်၏ထောင့်တွင်ကျွန်ုပ်ပြခဲ့သည့်သူမ၏တွစ်တာပရိုဖိုင်းရုပ်ပုံ၏သမ်းနေးကို“ ခိုးယူခဲ့ပြီ” ဟုပြောဆိုခဲ့သည်။
DMCA တိုင်ကြားချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ YouTube သည်တိုင်ကြားသူနှင့်ချက်ချင်းသဘောချင်းတူသည်ကိုကျွန်ုပ်နားလည်ပါသည်၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ဗွီဒီယိုကို 2019 မှဖယ်ရှားခဲ့သည်ဟုသူတို့မအံ့သြခဲ့ပါ။
ငါတပတ်လုံးအနားယူခဲ့တုန်းကဒီဖြစ်စဉ်တွေအားလုံးဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်၊ ငါကဒီမှာမဟာသတောင်၊ elope ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ကျွန်ုပ်၏လက်ထပ်ခြင်းအသစ်အတွက်သာမကကျွန်ုပ်၏လက်တော့ပ်သို့မဟုတ်အင်တာနက်ကောင်းကောင်းမရှိသောကမ်းခြေရှိအားလပ်ရက်များကိုလည်းသန္နိgod္ဌာန်ချထားပြီးဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည် YouTube နှင့် Skepchick မှအရာအားလုံးကိုလျှို့ဝှက်စွာပြုလုပ်ခဲ့ပြီး၎င်းအတွက် ၀ င်ရောက်လေ့လာခြင်းကိုလျစ်လျူရှုခဲ့သည်။ သီတင်းပတ်
ငါသူမ၏မူပိုင်ခွင့်ချိုးဖောက်နေကြောင်းသူတို့ကိုအကြောင်းကြားရန် Prause လည်း Patreon ဆက်သွယ်ခဲ့သည်။ သူတို့ကကျွန်မနဲ့အဆက်အသွယ်ရတယ်။ ငါထင်တယ်၊ ချိုးဖောက်မှုလို့ယူမှတ်ခံရတဲ့ YouTube ဗီဒီယိုမှာ၊ ဒါကမရရှိနိုင်ဘူးလား ... ငါတို့ကော? သူတို့သဘောတူလိုက်တယ်။
ငါ့အားလပ်ရက်ပြီးတဲ့နောက်မှာဒီအရာအားလုံးကိုတွက်ချက်ဖို့ငါဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်ရွေးချယ်သောအရာများမှာ DMCA နှုတ်ယူရန်ဆက်လက်ခွင့်ပြုရန်နှင့် Prause ၏ရုပ်ပုံကိုကျွန်ုပ်၏ဗီဒီယိုများမှပြန်လည်တင်ယူရန်သို့မဟုတ်ပြန်လည်တရားစွဲရန်သို့မဟုတ်အခြေခံအားဖြင့်ဤတရားဝင်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုပိုမိုဆိုးရွားစေမည့်တန်ပြန်ဝတ်စုံကိုတင်ရန်ဖြစ်သည်။ တရားစွဲဆိုမှု၏အခြေခံမှာ“ ဟေ့၊ ငါပြောနေသူကိုသရုပ်ဖော်ရန် ၁၀ စက္ကန့်ကြာလျှင်တစ်စုံတစ် ဦး ၏နိမ့်ဆုံးပရိုဖိုင်းပုံကိုသုံးရန်မျှတစွာအသုံးပြုသည်” ဖြစ်သော်လည်းမျှတစွာအသုံးပြုခြင်းသည်မရှင်းမလင်းလှသောနယ်မြေဖြစ်သည်။ ကဲ့သို့ပင်အလွန်စျေးကြီးသောဥပဒေရေးရာတိုက်ပွဲများကိုအနိုင်ရခဲ့ပြီးမျှတစွာအသုံးမပြုသည့်အရာကိုဖော်ထုတ်ရန်ကြိုးစားခြင်းကိုဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ ငါ "ဟေ့၊ ငါဒီရန်ပွဲအတွက်အချိန်၊ ပိုက်ဆံဒါမှမဟုတ်စွမ်းအင်မရှိဘူး။ ငါဗီဒီယိုများတည်းဖြတ်နှင့်ပြန်လည်တင်ပို့ပါလိမ့်မယ်။ " ဒါဟာအပိုအလုပ်ပါ၊ နည်းနည်းတော့စိတ်ဖိစီးမှုများတယ်၊ ခုခံကာကွယ်မှု (သို့) ခြိမ်းခြောက်မှုဖြစ်စေတဲ့တရားစွဲဆိုမှုဘယ်လောက်များများကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားမယ်ဆိုတာငါမြင်တွေ့သင့်တယ်။
ဒါပေမယ့် YouTube ကငါ့ကိုမူရင်းဗီဒီယိုကို ၁၉၉၉ ကနေဒေါင်းလုပ်ဆွဲခွင့်မပြုဘူး၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲဒါ DMCA သပိတ်မှောက်မှုကြောင့်ဖြစ်တယ်။ ငါ ၂၀၁၉၊ နိုဝင်ဘာ မှလွဲ၍ အရာအားလုံးကိုကျွန်တော့်ရဲ့ပြင်ပ hard drive တွေဆီကိုအရန်သင့်သိမ်းဆည်းထားပုံရတယ်။ ငါလုပ်တယ် ဒါကြောင့် cdry audio ပါတဲ့ဗွီဒီယိုအရည်အသွေးနိမ့်တဲ့ဗားရှင်းကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိခဲ့ပြီး Prause ရဲ့ profile pic ကိုဖယ်ထုတ်ပြီး Tweets ရဲ့ screenshots တွေကိုလည်းဆင်ဆာဖြတ်တောက်မှုကိုပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်ထပ်မံမကိုင်တွယ်ချင်တော့ပါ။ သတိရပါ၊ အဲဒါအရေးကြီးတယ်။
ဒါကြောင့်ဒီသီချင်းကိုဒီသီတင်းပတ်အစောပိုင်းကဖွင့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာမင်းတို့အားလုံးမကောင်းတဲ့အရည်အသွေးနဲ့ငါ့ကိုထူးဆန်းတာကမေလဖြစ်မယ်လို့နို ၀ င်ဘာလကဆိုတယ်။
အဲဒါပြီးတာနဲ့နောက်ဆုံးထွက်ဗွီဒီယိုကိုစတင်တည်းဖြတ်တော့တာပဲ၊ ကျွန်ုပ်မှာဖိုင်အဟောင်းရှိလို့ပိုပြီးလွယ်ကူသွားတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါမပြီးခင်မှာ၊ ဒီအီးမေးကို YouTube ကနေရတယ်။ ငါ Prause ရဲ့ DMCA ကိုမငြင်းခဲ့ပေမဲ့ YouTube ကသူ့ကိုဖမ်းမိတာကသူ့ရဲ့ pic ဓာတ်ပုံကိုအမှန်တကယ်မျှတစွာအသုံးပြုခြင်းမှာအများဆုံးတွေ့ရတာကိုသတိပြုမိခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်ဒီဗီဒီယိုကကျွန်တော့်အတွက်လူသိရှင်ကြားထုတ်လွှင့်ဖို့ထပ်ခါတလဲလဲရရှိခဲ့တယ်၊ ငါ ထပ်မံ၍ လူသိရှင်ကြားထုတ်ပြန်ခြင်းမပြုမီ၊ ကျွန်ုပ်သည်အရာအားလုံးကိုရှင်းပြသည့်နေရာတွင်ဤဗီဒီယိုကိုပြုလုပ်လိုကြောင်းဆုံးဖြတ်သောကြောင့်၊ Prause တွင် update ကိုပေးသောအပိုင်းကိုဖယ်ရှားခဲ့သည်။ ယခုရိုးရှင်းစွာပြောရလျှင်ခရစ်ယာန်အခြေခံဝါဒီများနှင့်ညစ်ညမ်းသောတားမြစ်ချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ သိပ္ပံအသစ်မှအာရုံပျံ့လွင့်ခြင်းမရှိသောကြောင့်ဗီဒီယိုသည် ပို၍ ကောင်းသည်။
ငါထို့နောက် YouTube ကိုအီးမေးလ်ပို့ပြီး "ဟေ့၊ အကယ်၍ ပရိုဖိုင်းပုံ၏ဆယ်စက္ကန့်သည်ဤဗီဒီယိုတွင်မျှတစွာအသုံးပြုခဲ့ပါကယခင်ဗီဒီယိုကိုလည်းထပ်တူလုပ်နိုင်ပါ့မလား" ငါပြန်မကြားရသေးဘူး၊ ရိုးရိုးသားသားပြောရရင် Google မှာလူတစ်ယောက်ကိုသွားတွေ့ဖို့အခက်အခဲရှိနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့်ဘယ်သူ့ကိုမှမြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတော့ငါမသိဘူး။ ဒါပေမယ့်ဒီဗီဒီယိုကိုပြန်လည်အသုံးပြုလာရင်ငါဆက်သွားနိုင်ပြီးအရည်အသွေးမကောင်းတဲ့သူကိုဖျက်ပစ်နိုင်တယ်။
၂၀၂၁ ဗီဒီယိုကိုအများပြည်သူသိအောင်လုပ်ပြီးတာနဲ့၊ YouTube ကနေအလိုအလျောက်အီးမေးလ်ထပ်မံရရှိသွားသည်။ *** တစ် ဦး တစ်ယောက် *** သည် ၂၀၁၁ ဗီဒီယိုအား“ privacy” စိုးရိမ်မှုများကြောင့်ပြန်လည်တင်ပို့ခြင်းတောင်းခံကြောင်းမှတ်သားထားခဲ့ပြီးအချိန်ကာလများမှာစက္ကန့်များဖြစ်သည်။ Nicole Prause ကိုအမှုဖွင့်ပြီးတရားရုံးရဲ့ဆင်ဆာအကွက်နဲ့အတူငါပြောနေတာ။ လူသားတစ် ဦး ကိုမကြည့်မီအပြောင်းအလဲများပြုလုပ်ရန် YouTube သည် ၄၈ နာရီကြိုတင်အသိပေးမှုပေးခဲ့ပြီး၎င်းသည်အမှန်တကယ်တွင် privacy ကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ဆုံးဖြတ်သည်။
ဤအတောအတွင်းကျွန်ုပ်သည်တွစ်တာတွင်ထူးဆန်းသောအဖြစ်အပျက်တစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့သည်ကိုသတိပြုမိခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်မမြင်နိူင်သောကျွန်ုပ်၏ Tweets များသို့ပြန်ကြားချက်များစွာရှိခဲ့ပြီးနီကိုးလ်ပရာယပ်စ်ကကျွန်ုပ်ကိုတွစ်တာတွင်ပိတ်ဆို့ထားသော်လည်းတစ်နည်းနည်းဖြင့်ကျွန်ုပ်၏ Tweets ကို ဆက်၍ ဖြေဆိုနိုင်ခဲ့သည်။ ငါ ... ငါဖြစ်နိုင်သောခဲ့တောင်မှမသိခဲ့ပါ။ ငါရှေ့ဆက်သွားပြီးသူမကိုပိတ်ဆို့ထားခြင်းကြောင့်၎င်းသည်မဖြစ်နိုင်တော့ပါ၊ သို့သော် (သူ၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာဘရောင်ဇာများမှကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ) သူမ၏ပရိုဖိုင်းကိုကျွန်ုပ်ကြည့်ပြီးသူမသည်ကျွန်ုပ်ကိုအသရေဖျက်မှုအဖြစ်စွပ်စွဲခဲ့သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ ၎င်းသည်သူမရေးသားသောဗွီဒီယိုအား YouTube ၌တင်သည့်သတင်းများမှသူမရေးသားခဲ့သည်မှာ -“ တင်ပြထားသည့်အချက်အလက်များသည်မှားယွင်း။ အသရေဖျက်မှုနှင့်လက်ရှိကယ်လီဖိုးနီးယားရှိရေဗက္ကာ Watson အားတရားစွဲဆိုမှု၏အကြောင်းအရာဖြစ်သည်။ သူမသည်သူမနှင့် ပတ်သက်၍“ သတင်း” ကိုမတင်ပြနိူင်ပါ။ ငါကယ်လီဖိုးနီးယားရှိသို့မဟုတ်အခြားတစ်နေရာမှာငါ့ကိုဆန့်ကျင်တရားစွဲဆိုမှုရှိခဲ့ကြောင်းစိတ်ကူးခဲ့ဘူး, ဒါပေမယ့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီနှင့်အတူလုပ်ဖို့တစ်ခုခုရှိပါသလဲ
Prause ကသူမသည်တွစ်တာမှဆိုင်းငံ့ခံခဲ့ရသည်ဟုပြောခြင်းသည်မှားယွင်းကြောင်းနှင့်အသရေဖျက်မှုဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ သို့သော်သူမသည်သူမ၏အကောင့်ကိုပြန်လည်ထည့်သွင်းခြင်းအတွက်တွစ်တာကိုကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ သူမဆိုင်းငံ့ခံခဲ့ရသည်ပြီးနောက်။ So.
သူမသည်သူမအသရေဖျက်မှုတရားစွဲဆိုမှုများဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်ဟုဆိုသည်သောအခါငါသူမ၏ရှုတ်ချ ငါ့ကိုမှတ်တမ်းတင်ပြီးတတ်နိုင်သမျှရှင်းအောင်လုပ်ပါ။ Gary Wilson အရသိရသည်, Prause ကသူ့ကိုဆန့်ကျင်။ တရားရုံးအခကြေးငွေပေးဆောင်ရန်အော်ရီဂွန်အသေးစားတောင်းဆိုမှုတရားရုံးတွင်အသရေဖျက်မှုအတွက်တရားစွဲဆိုခဲ့သည်။ သူမလည်းတစ်ယောက်ဆုံးရှုံးသွားသည် SLAPP ဝတ်စုံ တားမြစ်ထားသည့်အမိန့်ကိုရရန်ကြိုးစားသည့်အနေဖြင့် (ကျွန်ုပ်သည် SLAPP များဆန့်ကျင်ရေးအတော်များများရှိခဲ့သော်လည်းမှားယွင်းစွာထင်မြင်ခဲ့သည်ဟုထင်ပါသည်။ Prause ကသူမ၏တွစ်တာတွင်ဖော်ပြထားသည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်၏စာရွက်စာတမ်းအားလုံးကိုအပြည့်အ ၀ မဖတ်ပါ။ ) Wilson ။ ဘယ်အချိန်မှာအာရုံကြောခွဲစိတ်ဆရာဝန် Don Hilton သည် Prause အားအသရေဖျက်မှုဖြင့်တရားစွဲခဲ့သည်, Prause တရားရုံးအပြင်ဘက်အခြေချရန်သဘောတူညီခဲ့သည်။ သူမကိုဆန့်ကျင်သော NoFap's Alexander Rhode ၏အသရေဖျက်မှုသည်ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်သည်။ ပြီးတော့ psychotherapist Staci Sprout ကပြောပါတယ် တရားမ ၀ င်သောတရားစွဲဆိုမှုတစ်ခုအတွက်သူမအား Prause ၏အနှောင့်အယှက်ပေးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သူမကျိန်ဆိုရန်တောင်းဆိုပြီးနောက်သူသည် Sprout အားသူမ၏ဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀ ပေးဆောင်ရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ထို့နောက်သူသည်ကာလီဖိုးနီးယားရှိအမှုငယ်မှုဆိုင်ရာတရားရုံးတွင်တရားစွဲဆိုရန်အမှု၌တရားစွဲခံရသည်။ နေရာမှား
တွစ်တာကိုပြန်ရောက်ရင် Prause ကသူမဝေဖန်သူများက“ anti-porn သူရဲကောင်းများ” လို့ပြောကြတယ်။ ဒီခေါင်းစဉ်မှာပါတဲ့ဗွီဒီယိုနှစ်ခုထဲကကျွန်တော်ဟာညစ်ညမ်းမှုကိုလူတွေအတွက်ဆိုးတယ်လို့မထင်ပါဘူး။ သူမသည်ကျွန်ုပ်သည်သူမနှင့်တရားစွဲဆိုခြင်းခံရသည်ဟုပြောခဲ့သည် (၎င်းသည်လုံးဝရူးသွပ်မည်မဟုတ်ဟုကျွန်ုပ်တစ်ခါမှမပြောခဲ့ဖူး)၊ သူမကသူသည် ScramNews နှင့်တရားစွဲဆိုခြင်းခံရကြောင်း (ကျွန်ုပ်သည်မည်သည့်အခါမှမပြောခဲ့ပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်မှန်ကန်ကြောင်းကိုပြောကြားခဲ့သည်။ Prause ၏ထင်မြင်ချက်ကိုထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ခြင်းအတွက်အသရေဖျက်မှုအတွက်တရားစွဲဆိုခြင်းသည်သူတို့အမှုအားဆုံးရှုံးခဲ့ရပြီးတောင်းပန်ရခြင်း၊ အခကြေးငွေပေးဆောင်ခြင်းတို့ကြောင့်စီးပွားရေးမှထွက်ခွာသွားခဲ့ရသည်။ ထို့နောက်သူမကကျွန်ုပ်သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားခံရခြင်းမရှိဟုပြောသောအုပ်စုများနှင့်ချိတ်ဆက်သည်ဟုဆိုသည်။ သူမလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားခံခဲ့ရခြင်းရှိ၊ အတော်လေးမဟုတ်သော sequitur ။
နောက်ဆုံးသူမအနေဖြင့်ယခင်ကကျွန်ုပ်၏ခိုးယူထားသောဓာတ်ပုံများအားကျွန်ုပ်တရားစွဲဆိုခြင်းများဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်၊ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွင်ပါ ၀ င်သည်ဟုမှားယွင်းစွာစွပ်စွဲထားသောဓာတ်ပုံများနှင့်သန့်ရှင်းသော shit တို့၏ဗွီဒီယိုကိုဖယ်ရှားခြင်းအတွက် YouTube အားကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ သူမညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွင်ပါ ၀ င်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သူမဤမှတ်ချက်ကိုမည်သို့ပေါ့ပေါ့တန်တန်ထုတ်လွှင့်သည်ကိုကျွန်ုပ်အမှန်တကယ်သိမြင်သွားသည်။ သူမမှာသူမညစ်ညမ်းနေတယ်လို့ဘယ်တော့မှမပြောဘူး။ သူမမှာလည်းညစ်ညမ်းနေတယ်ဆိုရင်ဘာကြောင့်အရေးကြီးတာလဲ။ လိုပဲ, သငျသညျအမျိုးသမီးကြဘူး! ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကိုကြည့်ရတာဘာမှမဟုတ်တာ၊ ရှက်စရာဘာမှမရှိဘူး။
ဒီတော့ Prause ကငါ့အကြောင်းများစွာမှားယွင်းကြောင်း Tweet လုပ်ခဲ့ ဒါကငါသညျဤအသရေဖျက်မှုတရားစွဲဆိုမှုအားလုံးကိုဝင်ရောက်တော့မည်ဟုဆိုလိုပါသလော။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်ဤအရာသည်ငါ (ရှေ့နေမဟုတ်သူ) နားလည်သည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်ကဲ့သို့သောအများပြည်သူဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်တစ် ဦး ကိုအသရေဖျက်မှုသည်မှားယွင်းကြောင်း၊ သူမ၏ပြောဆိုချက်များသည်မှားယွင်းကြောင်းထင်ရှားသော်လည်းသူမမှားကြောင်းသူသိခဲ့ပါသလား။ ဒီတစ်ခါလည်းမဖြစ်ကောင်း! သူမသည်သူမနှင့်အများပြည်သူဆိုင်ရာနယ်ပယ်တွင်တိုက်ခိုက်နေသည့်အခြားလူများနှင့်ရောထွေးနေခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ထိုလူများထဲမှတစ် ဦး ကသူမသည်ညစ်ညမ်းမှုကိုပြုသည်ဟုဆိုသည်။ ငါမသိဘူး။
အဲဒါဟာကျွန်တော့်ကိုပျက်စီးစေခဲ့တာလား။ ကောင်းပြီ၊ သူမသည်ကျွန်ုပ်၏အဓိက ၀ င်ငွေပံ့ပိုးသူ Patreon ကို Tweets အတု (တပုဒ်တွင်ပါ ၀ င်ခဲ့သည်) (သူသည်ကျွန်ုပ်၏ယခင်ဗွီဒီယိုကိုဖယ်ရှားရန်လည်းဆက်သွယ်ခဲ့သည်) ဟုတ်ကဲ့၊ သူမ၏ DMCA သည်ဤဗီဒီယိုကိုအချိန်အတန်ကြာဖယ်ရှားခဲ့ပြီးကြော်ငြာဝင်ငွေအချို့ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ ဤဗွီဒီယိုများကိုတည်းဖြတ်ရန်၊ ပြန်လည်မှတ်တမ်းတင်ရန်နှင့်ပြန်လည်တင်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်သည်နာရီအနည်းငယ်ကြာသည်။ ဒါပေမယ့်တကယ့်တကယ်တော့ငါအသရေဖျက်မှုတရားစွဲတာကိုငါမုန်းတယ်။ ငါမင်းကိုယ့်ဘာသာကိုယ်စမယ်ဆိုရင်မင်းကထိုက်တန်တယ်ဆိုတာယုံမှာပဲ။ ယခုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်၌ Patreon နှင့် YouTube အကောင့်များရှိနေသေးသဖြင့်ဆုံးရှုံးမှုကိုလက်ခံရန်ကျွန်ုပ်ဆန္ဒရှိသည်။
တရားရုံးစနစ်ကိုသုံးတဲ့သူတွေကိုဝေဖန်သူတွေကိုနှုတ်ဆိတ်နေအောင်ငါဆန့်ကျင်တယ်။ ငါ Prause မည်သို့ပြုမူနေသည်ကိုကြည့်ရှုရန်နှင့်သူမအလေးအနက်ထားခံရဖို့မဖြစ်ကိုနားလည်ရန်ဆင်ခြင်တုံတရားလူများ၏ဘုံသဘောမျိုးအတွက်အများကြီးမဟုတ်ဘဲယုံကြည်စိတ်ချလိမ့်မယ်။ ဒါဟာသဘောတရားကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွေကိုမထိခိုက်စေဘူးဆိုတာကိုသိလိုက်တာနဲ့သူနဲ့ကျွန်တော်သဘောတူလိုက်တဲ့အခါသူမကကျွန်တော့်နောက်ကိုလိုက်သွားမှာပါ။ ပြီးတော့ငါဖြစ်လို့အရာအားလုံးကိုဖျက်ပစ်ပြီးခြိမ်းခြောက်ခံရတဲ့အခါဆက်လုပ်လို့မရဘူး။ ငါအရာအားလုံးပွင့်လင်းထွက်ဖြစ်ဖို့ကြိုက်တတ်တဲ့။ ဒါကြောင့်ဒီဗီဒီယိုကိုကျွန်တော်ရိုက်ပြီးတခြားဗီဒီယိုတွေကိုလူသိရှင်ကြားဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေတယ်။
ဒါကြောင့်အခုအချိန်မှာအဖြစ်အပျက်ပါပဲ။ ငါဒီအကြိမ်ပေါင်းများစွာမှတ်တမ်းတင်ရန်ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်ငါ Prause ငါ့ကိုပိတ်ထားရန်ကြိုးစားနေသည်အကြောင်းကြားစာအသစ်တစ်ခုကိုရရှိသည့်အခါတိုင်း, ဒီကနီကိုးလ် Prause ရုပ်သံလိုင်းမဟုတ်သောကြောင့်ဤသည်ငါ့နောက်ဆုံးဗီဒီယိုလုပ်ဖို့ကြိုက်တတ်တဲ့ဖြစ်ပါသည် ဘာသာရပ်အပေါ်။
သငျသညျဤအကြောင်းပိုမိုမကြာခဏ updates များကို, ငါ့ခွေး၏ဓာတ်ပုံများ, မိုက်မဲသောပြက်လုံးများနှင့်သိပ္ပံဆိုင်ရာပစ္စည်းပစ္စယချင်လျှင်, သင် Twitter @ ပေါ်တွင်ငါ့နောက်သို့လိုက်နိုင်ပါတယ်ရေဗက္က။ ကျွန်ုပ်၏ဗီဒီယိုများကြိုက်နှစ်သက်ခြင်း၊ စာရင်းသွင်းခြင်းနှင့်သူငယ်ချင်းများနှင့်မျှဝေခြင်းလုပ်သော Patreon ရှိ YouTube နှင့်ဤ YouTube ရှိလူများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ငါတကယ်တန်ဖိုးထားတယ်။
မနက် ၄ နာရီတွင် Prause သည်သူမ၏ဆိုက်ဘာသောင်းကျန်းမှုကိုစတင်ခဲ့သည်။ tweet ပြီးနောက် tweet တွင် Prause က“, CA 6208.1"နှင့်ဆက်စပ်သောစည်းမျဉ်းဖြစ်သော အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှု၊ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုနှင့်နောက်ယောင်ခံခြင်းခံရသူများအတွက်လျှို့ဝှက်လိပ်စာအစီအစဉ် - အစီအစဉ်ဥပဒေ (လုံခြုံသောအိမ်တွင်) ။ ၎င်းကို CA ရှေ့နေချုပ်ရုံးမှပြဌာန်းထားသည်။ အဆိုပါပရိုဂရမ်သည်စာရင်းသွင်းသူ၏လိပ်စာနှင့်ဖုန်းနံပါတ်များထုတ်ဝေခြင်းကိုတားဆီးရန်လုပ်ဆောင်သည်။ Watson ၏ဗွီဒီယိုတွင်ပါ ၀ င်ခြင်းမရှိပါ (သူမ၏ဗီဒီယိုများတွင် Prause ၏ပုံလည်းမပါပါ) ။ နောက်တစ်ကြိမ် Prause သည်သူမ၏သားကောင်များကိုနှောင့်ယှက်ရန် Safe At Home ကိုအလွဲသုံးစားလုပ်နေသည်။ ကြည့်ပါ
၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ နို ၀ င်ဘာလ၊ “ လုံခြုံစိတ်ချရသောအိမ်တွင်းအစီအစဉ်” ကိုအလွဲသုံးစားပြုခြင်းကိုကျူးလွန်ခြင်း။ YBOP ၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက် (Linode) အားသူမ၏လိပ်စာသည် YBOP တွင်မှားနေသည်ဟုမှားယွင်းစွာစွပ်စွဲခြင်း၊
အခြားသူများ - ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ နို ၀ င်ဘာလ။ ။ “ လုံခြုံစိတ်ချရသောအိမ်တွင်းအစီအစဉ်” အလွဲသုံးစားပြုခြင်းကိုကျူးလွန်ခြင်း။ သူမ YouTube ရုပ်သံလိုင်းအားတရား ၀ င်အရေးယူခြင်းအားခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊ ဗီဒီယိုသည် YBOP ရှိသူမ၏အိမ်လိပ်စာနှင့်အသရေဖျက်မှုဖြစ်သည်ဟုမဟုတ်မမှန်စွပ်စွဲခြင်း
သူမကအမည်ပေးခဲ့သောကြောင့် Prause သည် CA ၏ Safe At Home တွင်လိမ်လည်မှုဖြင့် ၀ င်ရောက်ခဲ့သည်မှာသေချာသည် me သူမ၏အတွက်လုပ်နေတာများအတွက်အကြောင်းပြချက်အဖြစ် လိမ်တယ် ထုတ်ပယ်ရန် အဆိုပါ Don Hilton ကတရားစွဲဆိုမှုအတွက်တင်သွင်းခဲ့သည် (သူမ၏ထုတ်ပယ်ခြင်းဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုကိုငြင်းပယ်ခဲ့သည်) ငါသူမ၏လုံခြုံမှုကိုခြိမ်းခြောက်ဘူး။ နောက်ထပ်: ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ နို ၀ င်ဘာလ။ Prause သည်ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိ“ Safe At Home Program” ထဲသို့မှားယွင်းသောဟန်ဆောင်မှုများဖြင့် ၀ င်ရောက်ပြီးသူမရဲ့သားကောင်များနှင့်ဝေဖန်သူများကိုအနှောင့်အယှက်ပေးသည်
မဟုတ်မမှန်စွပ်စွဲချက်များအရ Watson သည် CA Safe at Home ကိုချိုးဖောက်ခဲ့သည်။
သူမသည် Patreon ကိုတရားစွဲဆိုခဲ့သည်ဆိုပါက (ဖြစ်နိုင်လျှင်သေးငယ်သောတောင်းဆိုမှုများတရားရုံး)
ထိုအခါ Netflix doc လာမယ့်ဆိုပါတယ်။ သေချာတာပေါ့။
ဆက်လက်၍ Watson သည် CA Code စည်းမျဉ်းကိုဖောက်ဖျက်သည်ဟုဆက်ပြောနေခြင်းနှင့်လိမ်ညာနေသည်။
Prause သည် Watson ကိုအနှောင့်အယှက်ပေးရန်သူမ၏ကိုယ်ပိုင်ချည်ကိုဖန်တီးသည်။ သို့သော်သူမ (သူ၏ဝေဖန်သူများအားလုံးကိုပိတ်ဆို့ခြင်းမပြုမီ) သူ၏မုသာစကားကိုသိသိသာသာတွန်းအားပေးသည်။
တကယ်တော့ဥပဒေဟာ SLAPP ကိုဆန့်ကျင်နေပြီး SLAPP ရဲ့ရွေ့လျားမှုကိုထုတ်ပေးတာကဆေးကုသမှုပဲ။ တရားဝင်ဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုမကြာခဏ2ကိုအသုံးပြုပါ အပြန်အလှန်ဖလှယ်အသုံးအနှုန်းများ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ချီးကျူးစရာအကြောင်းမရှိဘူး သူမဒေဝါလီခံတင်သွင်းခဲ့သည် ငါ့ကိုပြီးနောက်ရှေ့နေအခကြေးငွေ ~ ~ $ 40K ပေးဆောင်ရှောင်ရှားရန် အဆိုပါ SLAPP အာဏာရ တရားရုံးကငါ့ကိုချီးမြှင့်ခဲ့သည်။ သငျသညျသူမ၏အဘို့စိတ်မကောင်းခံစားရမီ, သိပါ ချီးမွမ်းခြင်းသည်အဝေးမှမွှေးကြိုင်သောသူမဟုတ်ပါ။ သူမသည်သူ၏ပိုင်ဆိုင်မှုအများစုကိုအငြိမ်းစားအကောင့်ထဲသို့ (ဒေါ်လာသန်းလေးပုံတစ်ပုံကျော်ကျော်) ထဲမှထုတ်ပစ်လိုက်ပြီး (ဒေါ်လာ ၃၀၀၀ အောက်) စားသုံးသူကြွေးမြီအနည်းငယ်ကိုစာရင်းပြုစုခဲ့သည်။ သူမရဲ့ကွှေးမွီမဆပျတဲ့နိုငျငံရေးလုပျငနျးမြားကိုလုပျဆောငျနတေယျဆိုရငျ အလားအလာ တရားသူကြီးကငွေပမာဏကိုကောင်းချီးပေးပြီးသည်နှင့် (အမှုမစစ်ဆေးရသေးသော) အသရေဖျက်မှုသုံးမျိုး၏တာ ၀ န် ၀ တ္တရားများ၊ သတိပြုရန်မှာ Prause ၏အာမခံကုမ္ပဏီသည်သူမဒေဝါလီခံခြင်းတရားရုံးအားပယ်ချစေလိုသည့်အသရေဖျက်မှုအတွက်တရားရေးကုန်ကျစရိတ်အားလုံးကိုအကုန်အကျခံခဲ့သည်။
အရင်တုန်းကမိန်းမရှစ်ယောက်ရှိတယ်။ ငါ Prause အားဖြင့်ဥပဒေရေးရာဖိုင်အားလုံးကိုမြင်ကြပြီကတည်းကငါသူမလိမ်သည်ကိုငါသိ၏။ ထပ်တူထပ်မျှ -
Obsessive response & မုသား - Watson ရဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာ Nikky ပုံမပါခဲ့ဘူး။
အခြားအကောင့်သည်တူညီသော Prause မှတ်ချက်များကိုပြန်လည်ဖြေကြားသည်။ ချီးမွမ်းစကားကသူမကိုပိတ်ဆို့ပြီးလိမ်နေသောအဖြေဖြင့်ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်ပြန်ပြောသည်။
ချီးမွမ်းခြင်းသည်လိမ်နေသည်။ မေလ ၂၀၂၁ Watson ဗီဒီယိုတွင်သူမအားသူမ၏ဓါတ်ပုံများမရှိပါ။ Watson သည် ၂၀၁၉ ဗီဒီယို၏ပြန်လည်တင်ထားသောဗားရှင်းမှ Prause ၏ဓာတ်ပုံကိုဖယ်ရှားခဲ့သည်။
Prause ၏နောက်ထပ်မလိုအပ်သောတွစ်တာနှစ်ခုတွင်တုန့်ပြန်မှုများကသူမအားဖုန်းခေါ်သည်။ သူမဆီလျှော်သော CA Safe At Home ကိုကိုးကားသည်။ ထုံးစံအတိုင်းသူမက LAPD ပါ ၀ င်ပတ်သက်သည်ဟုပြောဆိုသည်။
Prause သည်နောက်ထပ်အကြောင်းအရာ (၂) ခုထပ်တိုးသည် (သူမသည်အခြားအကောင့်များကိုပိတ်ထားပုံရသည်)
သေးသည်အခြားချည်၌တည်၏။ “ TIL” ပြန်ကြားချက်သည်အထူးသဖြင့်ဖျော်ဖြေမှုဖြစ်သည်။
သူမ၏ porn-shill ၏သူငယ်ချင်း Jerry Barnett နှင့်အတူဆက်လက်:
အခြားသူများ - ၂၀၂၁ ခုနှစ်မေလ ၇ ရက် - အွန်လိုင်းဝေဖန်မှုများကြောင့်မကျေမနပ်ဖြစ်ခြင်း, Prause သည်ရေဗက္ကာ Watson ၏ဗွီဒီယိုကို“ debunk” လုပ်ရန်၊ မိနစ် ၂၀ အတွင်း ၁၂ ကြိမ်တွစ်တာ (Prause မှသူမအောက်တွင်ရေးသားထားသည့်အကောင့်များကိုပိတ်ထားပုံရသည်) ကိုလိမ်သည့်ဆလိုက်တစ်ခုဖန်တီးသည်။
ဝေဖန်မှုများမြင့်တက်နေသည့်အချိန်တွင် Prause သည် Watson ၏ဗွီဒီယိုကို“ ဖြိုဖျက်” ရန်အတွက်လိမ်နေသောဆလိုက်ကိုထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ သူမသည်မိနစ် ၂၀ အတွင်း ၁၂ ကြိမ်ရေးသားခဲ့သည်။ သူမကိုဝေဖန်သောအကောင့်များအောက်တွင်တင်ခဲ့သည်။ အဘယ်သူမျှမပြန်ပြောသည်နှင့်အမျှ Prause သည်သူမ၏အသံကိုသူတုိ့ပြန်ကြားချက်မတင်မီအားလုံးပိတ်ဆို့ထားခြင်းခံရသည်။ သူမ၏အဘို့ပုံမှန် MO ကို။ ဂုဏ်ယူစရာဆလိုက်:
1) သူမက Watson သည်သူမ၏ပုံကိုတင်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။အိမ်တွင်လုံခြုံသည်။ " ပထမ ဦး စွာ Watson ၏ဗွီဒီယိုတွင် Prause ၏ရုပ်ပုံများမရှိပါ။ ဒုတိယအချက်အနေဖြင့်မူပိုင်ခွင့်မရရှိနိုင်သည့်အများပြည်သူသုံးရုပ်ပုံများကိုလွတ်လပ်စွာအသုံးပြုနိုင်ပြီး“ ခိုးယူခံရခြင်း” မဟုတ်ပါ။ စိတ်ချရသောအိမ်တွင်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသည်အလွန်ကြီးမားသောကိုယ်ခန္ဓာထိခိုက်နစ်နာမှုကိုလှုံ့ဆော်ရန်သို့မဟုတ်တစ်စုံတစ် ဦး အားခြိမ်းခြောက်ရန်သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးလုံခြုံမှုအတွက်ဓမ္မဓိreasonable္ဌာန်ကျကျကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာကြောက်ရွံ့ရန်ရည်ရွယ်ထားသောပုံများမှသာကာကွယ်သည်။ Watson ကထိုအရာတစုံတခုကိုမျှပြု၏။ သူကိုယ်တိုင် Prause သည်သူမ၏ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေမှုများအပါအဝင်သူ၏ဓာတ်ပုံများကိုအင်တာနက်ပေါ်တွင်လွတ်လပ်စွာရရှိစေသည်။ ပိုမိုသိရှိရန် - ၂၀၁၁ ခုနှစ်၊ နို ၀ င်ဘာလ။ Prause သည်ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိ“ Safe At Home Program” ထဲသို့မှားယွင်းသောဟန်ဆောင်မှုများဖြင့် ၀ င်ရောက်ပြီးသူမရဲ့သားကောင်များနှင့်ဝေဖန်သူများကိုအနှောင့်အယှက်ပေးသည်
2) ချီးမွမ်းပြောဆိုထားသည် Rhodes v ။ တရားစွဲဆိုမှုချီးမွမ်း လုံးဝထုပ်နေသည် (Watson ကသေးအပြီးသတ်မခံခဲ့ရဟုပြောသည်) ။ NoFap ၏တရားစွဲဆိုမှုကို Prause ပြီးနောက် ၂၀၂၁ Aprilပြီလတွင်ဖြေရှင်းခဲ့သည် ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုကိုရှောင်ရှားရန်ဒေဝါလီခံတင်သွင်းခဲ့သည်ဒေဝါလီခံခြင်းဆိုင်ရာတရားရုံးသည်နောက်ဆုံးလှုပ်ရှားမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ဆုံးဖြတ်ချက်မချနိုင်သေးသော်လည်း (“ ပြီးစီးခြင်း” သည်ရှင်းလင်းပြတ်သားမှုမရှိသေးပါ) ။ သို့သော် Prause အားတရားစွဲဆိုသောတတိယအသရေဖျက်မှုမှာဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီး Prause ၏အာမခံကုမ္ပဏီကမူ၎င်းအားခုခံကာကွယ်ရန်ငြင်းဆန်ခဲ့သည်။ အာရုန်အမ် Minc, Esq v ။ Melissa အေလယ်သမားနှင့်နီကိုးလ် R. Prause, ဖြစ်ရပ်မှန်အမှတ်: အိုဟိုင်းယိုးပြည်နယ်, Cuyahoga ကောင်တီရှိ CV-20-937026 ပုံပြင်လယ်သမားသည် Minc တရားစွဲဆိုထားသူနှင့်အခြေချပြီးဖြစ်ကြောင်း၊ သူ (လယ်သမား) တွင် Prause (နှင့် Farmer မှပြန်လည်ရေးဆွဲထားသည့်) ၏ပြောဆိုချက်များမှန်ကန်ကြောင်းနှင့်မင်းခ်ကိုတောင်းပန်ကြောင်းအထောက်အထားမရှိကြောင်းဝန်ခံခဲ့သည်အမျိုးသမီး Melissa လယ်သမား၏ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းပေးရန်၏ PDF ကို].
3) Watson သည်ဗီဒီယိုတွင်မှန်ကန်စွာဖော်ပြထားသည့် Prause တင်သွင်းသည့်အမှုနှင့်စပ်လျဉ်း။ Staci Sprout အသေးအဖွဲတောင်းဆိုမှုများအကြောင်းချီးမွမ်းခြင်းကို Jabbers များက
နှင့် psychotherapist Staci Sprout ကပြောပါတယ် တရားမ ၀ င်သောတရားစွဲဆိုမှုတစ်ခုအတွက်သူမအား Prause ၏အနှောင့်အယှက်ပေးမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သူမကျိန်ဆိုရန်တောင်းဆိုပြီးနောက်သူသည် Sprout အားသူမ၏ဒေါ်လာ ၁၀၀၀၀ ပေးဆောင်ရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ထို့နောက်သူသည်ကာလီဖိုးနီးယားရှိအမှုငယ်မှုဆိုင်ရာတရားရုံးတွင်တရားစွဲဆိုရန်အမှု၌တရားစွဲခံရသည်။ နေရာမှား
ထို့နောက်ချီးကျူးမှုကိုဝါရှင်တန်ပြည်နယ်တွင်တင်ခဲ့သည်။ Prause ၏အသေးအဖွဲတောင်းဆိုမှုများကိုကုထုံးဆရာ Sprout အားကျွန်ုပ်နှင့်ဆန့်ကျင်သူကဲ့သို့ပစ်ပယ်ခံရဖွယ်ရှိသည်။ သူမဆုံးရှုံးခဲ့ရသည်။ ချီးမွမ်းခြင်းမှာကိစ္စမရှိပါဘူး သူမနှင့်သူမခရိုနီများကသူမမျက်ခုံးလှုပ်ရှားမှု၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်သူမကြိုက်သည့်အတိုင်း“ သေခြင်းခြိမ်းခြောက်မှုများ” နှင့်“ ဘဏ္financialာရေးလိမ်လည်မှု” ကိုကျယ်ကျယ်လောင်လောင်အော်ဟစ်နိုင်သည်။ သူမ၏အသရေဖျက်မှုပြောဆိုမှုများသည်အချည်းနှီးသာဖြစ်ပြီး Sprout မှတန်ပြန်တောင်းဆိုမှုကိုသာဖြစ်ပေါ်စေသည်။
4) Prause သည်လှည့်စားသောဘာသာစကားကိုအသုံးပြုသည်။ဟီလ်တန်သည်အငြင်းပွားမှုမရှိခဲ့ပါ။"ဟမ်? Watson ကတိကျသောအောက်ပါကပြောသည်:
ဘယ်အချိန်မှာအာရုံကြောခွဲစိတ်ဆရာဝန် Don Hilton သည် Prause အားအသရေဖျက်မှုဖြင့်တရားစွဲခဲ့သည်, Prause တရားရုံးအပြင်ဘက်အခြေချရန်သဘောတူညီခဲ့သည်။
ဟီလ်တန်နှင့်ချီးမွမ်း ၂၀၂၁၊ ဖေဖော်ဝါရီလနှောင်းပိုင်းတွင်တရားစွဲဆိုမှုကိုဖြေရှင်းခဲ့သည်။ စည်းကမ်းချက်များကိုထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းမရှိသော်လည်းဟီလ်တန်အခြေချရန်အလျင်အမြန်မရှိသောကြောင့် Prause ၏အာမခံကုမ္ပဏီသည်သူမ၏ကိုယ်စားကြီးမားသောငွေပေးချေမှုကိုပြုလုပ်ရဖွယ်ရှိသည်။ ထို့ကြောင့် Prause သည်တရားရုံးပြင်ပတွင်အခြေချရန်အမှန်ပင်သဘောတူခဲ့သည်။
5) Prause သည် Staci Sprout အား Pornhub ၏စီအီးအို၏အိမ်မီးဘေးဗုံးဖောက်ခွဲမှုကိုထောက်ခံသည်ဟုစွပ်စွဲနေပုံရသည်။ Sprout (သို့) အခြားသူတစ် ဦး က“ PornHub စီအီးအို၏အိမ်ကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးခြင်းအတွက်ထောက်ခံခဲ့သည်” ဟုဆိုခြင်းသည်မမှားပါ။ သို့သော်မီးမှာကဲ့သို့ပင်သံသယဖြစ်ဖွယ်ရှိသည် ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီ PornHub သည် ၀ ယ်သူအားရှာဖွေနေပုံရသည်.
6) ချီးမွမ်းစကားက“ SLAPP” အောင်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးပုံပြင်တစ်ပုဒ်ရေးထားတယ်။ ကျွန်တော့်ကို Prause ရဲ့အတုအယောင်တားဆီးမိန့်ကို“ SLAPP” တရားစွဲဆိုလိုက်တယ် တရားသူကြီးကကျွန်တော့်ကို SLAPP အဆိုပြုချက်ကိုခွင့်ပြုပေးခဲ့သည်။ ဤသည်ငါ၏အဥပဒေရေးရာအခကြေးငွေပေးဆောင်ဖို့ Prause တာဝန်ရှိသည် သူမဒေဝါလီခံခြင်းအတွက်ဖြည့်စွက်ခြင်းဖြင့်သာရှောင်ရှားခဲ့သည်. အဘယ်သူမျှမကအခြားအမျိုးသမီးများကဒီရှေ့ဆက်၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်။ ဘယ်သူမှပြောင်းရွှေ့ဖို့မလိုပါဘူး Prause ကပြောင်းရွှေ့သည်ဟုပြောဆိုထားသည်။ သို့သော်သူမသည်ဒေဝါလီခံခြင်း၏တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအဖြစ်ကျိန်ဆိုခြင်းလျှောက်လွှာကိုလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည် သူမလိပ်စာအတိုင်း ၃ နှစ်နေခဲ့သည်။ မုသားအပေါ်အိပ်။
7) Prause ကမှားတယ်လို့ Watson ကပြောတယ် အမြဲတမ်းအတွက် Twitter မှဆိုင်းငံ့ထားသည်။ Watson ရဲ့ဗီဒီယိုမှ။
တွစ်တာသည်ယခင်ကိုယ်ပိုင်အကောင့်အပါအဝင် Prause အကောင့်များစွာကိုဆိုင်းငံ့ထားသည်။ နားမလည်နိုင်လောက်အောင်ပင်သူမသည်သူမ၏အကောင့်ကိုအဆုံးမဲ့အသရေဖျက်မှုနှင့်တားမြစ်ပိတ်ပင်မှုများရှိနေသော်လည်းမကြာသေးမီကဆိုင်းငံ့ခံရပြီးနောက်သူမ၏လက်ရှိပုဂ္ဂိုလ်ရေးအကောင့်ကိုပြန်လည်ထည့်သွင်းခဲ့သည်။ ရပ်ဆိုင်းမှု၏သမိုင်းကြောင်း
၂၀၁၅ အောက်တိုဘာတွင် Prause ၏မူလ Twitter အကောင့် @NicolePrause ကိုအမြဲတမ်းဆိုင်းငံ့ခဲ့သည် လက်မခံနိုင်သောအပြုအမူများအတွက်။
မတ်လ, 2018 ခုနှစ်, Prause ရဲ့ Quora အကောင့်ကိုပိတ်ပင်ထားသည် ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များတင်ခြင်းနှင့်တလွဲဖော်ပြခြင်းများအတွက်။
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်၊ အောက်တိုဘာတွင်၊ @BrainOnPorn Twitter အကောင့်၊ Prause စီမံခန့်ခွဲပုံရသည် အမြဲတမ်းဆိုင်းငံ့ခံခဲ့ရသည် ပစ်မှတ်ထားနှောက်ယှက်ခြင်းနှင့်အလွဲသုံးစားမှုသည်။
၂၀၂၁ မတ်လတွင်သူ၏ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ရေးတွစ်တာအကောင့်၊ @NicoleRPrause အား“ အကြမ်းဖက်ခြိမ်းခြောက်မှုများ” ပြုလုပ်ရန်အတွက်ယာယီရပ်ဆိုင်းခဲ့သည်။
ကျွန်ုပ်သည် Prause သည်နောက်ထပ်ပျောက်ကွယ်နေသောတွစ်တာအကောင့်နှစ်ခုနောက်ကွယ်တွင်ရှိသည်ဟုသံသယရှိသည်။ @ CorrectingWils1 နှင့်သူမ၏ပထမ ဦး ဆုံး porn စက်မှုလုပ်ငန်းအကောင့် shill @PornHelps.
အဓိကအချက် - အရေးမကြီးတဲ့အမှားအနည်းငယ်နဲ့ Watson ရဲ့ဗွီဒီယိုဟာတိကျမှန်ကန်တယ်။ သူမ၏စိတ်ခံစားမှုကိုမထိန်းနိုင်၊
အနှစ်ချုပ် - အဖြစ်မှန်နှင့် Prause ၏တွစ်တာများ။
Hilton နှင့် Rhodes အသရေဖျက်မှုဆိုင်ရာဝတ်စုံများတွင်အခြေချနေထိုင်မှုများသည်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမရှိသောသဘောတူညီချက်များအောက်တွင်ရှိသည်။
Prause ၏အာမခံကုမ္ပဏီသည် Rhodes နှင့် Hilton တို့အား Prause ကိုယ်စားကိုယ်စားပြုငွေပေးချေမှုများလုံးဝနီးပါးဆက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
ချီးကျူးစကားမကြာခဏ - "wစိတ်စွန်းကွက်နှင့်အတူ ithdrawn ။တရားစွဲဆိုမှုကိုဖြေရှင်းရန်တရားလို (Rhodes, Hilton) သည်တရားခံ၏“ သဘောတူညီချက်” ကိုလက်ခံပြီးမူလမူရင်းတရားစွဲဆိုမှုကိုပယ်ချရန်ဆန္ဒရှိသည်။ "စိတ်စွန်းကွက်နှင့်အတူ" သာတရားလိုသည်အဘို့နောက်တဖန်တရားခံတရားစွဲဆိုလိမ့်မည်ဟုဆိုလိုသည် မူရင်း တောင်းဆိုမှုများ။ တရားလိုသည်အခြေချသဘောတူညီချက်စည်းကမ်းချက်များကိုဖောက်ဖျက်ခြင်းကဲ့သို့သောတောင်းဆိုမှုများအတွက်ထပ်မံတရားစွဲဆိုနိုင်သည်။
သူမလည်းတွစ်တာစာတိုအသရေဖျက်မှုတွေ့ရှိခြင်းကိုအစဉ်အဆက်ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းမဟုတ်ပါ။"Prause ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုနှင့်ဂျူရီရုံးတင်စစ်ဆေးနှင့်အတူလိုက်နာရန်မလိုပါရှောင်ရှားရန်ဝတ်စုံကိုတစ် ဦး စီအခြေချခဲ့သည်။ ချီးမွမ်းခြင်းကိုအပြစ်မတင်ခဲ့ပါ ရှာဖွေတွေ့ရှိမှုတွေ၊ တစ် ဦး တရားစွဲဆိုမှုဖြေရှင်းသည့်အခါဤအပေါ်ပေါက်ပါဘူး။
A တတိယအသရေဖျက်မှုတရားစွဲဆိုမှုနေဆဲဖြစ်သည်, ငါသားကောင်မဟုတ်ဘဲပြစ်မှုကျူးလွန်သူအဖြစ်ဖော်ထုတ် Prause ဆန့်ကျင်တရားစွဲဆိုမှု2အနိုင်ရရှိ (ဝတ်စုံနံပါတ် ၁, ဝတ်စုံနံပါတ် ၁).
ဆလိုက်င်သူမ၏ tweets ရန်။
ရေဗက္ကာ Watson သည်အမျိုးသမီးများကိုနှစ်ပေါင်းများစွာနှောင့်ယှက်ခဲ့သည်ဟုဆို
နှောင့်ယှက်? DARVO ။
ယခု၎င်းသည်“ ညှိနှိုင်းထားသောအနှောင့်အယှက်ပေးမှု” ဖြစ်သည်။ ကျေးဇူးပြုပြီး
Watson ဟာဗီဒီယို ၃ ပုဒ်မတင်ခဲ့ပါဘူး။ သူမသည်ဗီဒီယိုအသစ်တစ်ခုသာတင်ခဲ့သည်။ အခြားတစ်ခုမှာ Prause ၏သဏ္removedာန်ကိုဖယ်ရှား။3ဗီဒီယိုကိုပြန်လည်တင်ခြင်းဖြစ်သည်။
ဘုရားရေ။ သူမသည်ယခုသူမအနိုင်ရဟုဆိုသည်ရဲ့ အဆိုပါ SLAPP ဝတ်စုံကို ငါအောင်နိုင်ခဲ့တယ်၊ သူမရှေ့နေကသူမရဲ့ tweets တွေကိုကူညီပေးခဲ့တယ် (သူမဖြစ်သကဲ့သို့ငါတော့မထင်ဘူး) pro se အဲဒီအချိန်ကစပြီး သူမသည်သူမ၏ဒေဝါလီခံကိုအသုံးပြုခဲ့သည် သူမ၏ကိုယ်ပိုင်ရှေ့နေများခိုင်မာသောရန်။
"သူမသည်မှားကြောင်းသိတယ်“ ဘာလဲ မကြောက်ပါနဲ့။ ရာထူးတိုးအုပ်စုများကသူမကိုသတ်ရန်ကြိုးစားနေပါသလား။ BS ။
Watson ကိုငွေပြန်အမ်းအမျိုးသမီးပညာရှင်များခြိမ်းခြောက်။ " ရယ်စရာ
"သေမင်းခြိမ်းခြောက်မှုများအမှန်ဖြစ်လာသည်“ ဘာလဲ ဒီတော့ Prause သူမအသတ်ခံခဲ့ဟုဆိုသည် ??
Prause ၏လိမ်လည်မှု၊ cyberstalking နှင့်အသရေဖျက်မှုကိုဖော်ထုတ်သောဗီဒီယိုတစ်ခု (၃ ခုမဟုတ်)
နှစ်ရက်အကြာတွင်သူမဆလိုက် ထပ်၍ တွစ်တာ။
၂၀၂၁၊ မေလ ၁၄ ရက်တွင်နောက်ထပ်တွစ်တာနှစ်ခု
မေ ၁၆ ရက်သူမရေဗက္ကာ Watson ကိုရူးသွပ်စွာ cyberstalking လုပ်ခြင်းကြောင့်သူမစာချုပ်ပျက်သွားသည်ဟုဆိုသည်
မေလ ၁၆ ရက်ကသူမ၏နှောင့်နှေးနေပြီးလိမ်လည်မှုအတွက်အသေးစားတောင်းဆိုမှုများ Staci Sprout နှင့်တိုင်ကြားလိုက်သည်။ သူမကယခင်အငယ်စားတောင်းဆိုမှုများဝတ်စုံ၌ရှိသကဲ့သို့ Prause ဆုံးရှုံးလိမ့်မည်။
မေလ3ရက်နေ့တွင် 16rd tweet ။ Watson ကိုတုံ့ပြန်ပေမယ့် Staci Sprout ကိုရှုတ်ချ
ကြည့်ပါ - ဇန်နဝါရီ ၂၄ ရက်၊ ၂၀၁၈ - Prause သည်ဝါရှင်တန်ပြည်နယ်သို့ကုထုံးဆရာ Staci Sprout အားအကြောင်းမဲ့တိုင်ကြားမှုများကိုတင်ပြသည်။
သို့သော်နောက်ထပ် (နောက်လာမည့်အပိုင်း) ရှိသေးသည်။
အခြားသူများ - ၂၀၂၁ မေ ၇ ရက်။ ။ Prause သည် alias reddit account တစ်ခုကိုအသုံးပြုနေသည်။သဘောတူ - လေယာဉ် -5361Rebecca Watson နှင့်သူမ၏ဗီဒီယိုတွင်ဖော်ပြထားသောအခြားသူများကိုရှုတ်ချရန် (Gary Wilson, NoFap)
Prause သည်ညစ်ညမ်းသောပြန်လည်နာလန်ထူခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုခွဲများ (r / pornfree, r / nofap) ကိုခြေရာခံရန် reddit aliases ၃၀ ခန့်အပါအ ၀ င်ဖြစ်နိုင်ချေ aliases ၂၀၀ ကျော်ကိုဖန်တီးထားသည်။ ဖြစ်နိုင်ခြေနီကိုးလ် Prause alias ကိုမှတ်တမ်းတင် PDF ကို.
Twitter မှတစ်ဆင့် Rebecca ကို Cyberstalking ဖြင့် Prause သည်မကျေနပ်ကြောင်းထင်ရှားသည်။ သံသယမရှိပါဘူး သဘောတူ - လေယာဉ် -5361 နောက်ဆုံးပေါ် Prause alias သည်မှတ်ချက် ၆ ခုအနက် ၃ ခုသည် Watson ၏ဗီဒီယိုနှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်ပြီး Prause ၏ tweets များကိုထင်ဟပ်ဖော်ပြသည်။ တကယ်တော့ Prause နှင့်အခြားအနည်းငယ်သာသိသောတရားရုံးစာရွက်စာတမ်းများနှင့်ဆက်စပ်သောမှတ်ချက်များ ၂ ခုမှာ - https://www.pacermonitor.com/public/case/30620620/RHODES_v_PRAUSE_et_al။ အခြားလင့်ခ်များသည်ပုံမှန်အားဖြင့်တွစ်တာစာတိုများနှင့် ဝီကီပီးဒီးယားစာမျက်နှာများသို့ဝင်။ ခဲ့သည် (သူမ၏မဆိုသုံးပြီး ဝီကီပီးဒီးယား sockpuppets ၅၀ ကျော်).
In ဤမှတ်ချက်ကို Agreeable-Plane-5361 Watson ကိုလိမ်ညာသူဟုခေါ်သည်။ သုံးသပ်သူသည်“ Agreeable-Plane-5361” ကို Nicole Prause အဖြစ်ကြိုဆိုသည်။ ဟားဟား။
မေ ၂၀၂၁ - Prause သည်သူမ၏ Span-Lab.com URL ဟောင်းကိုအသစ်တဖန် ပြန်၍ မပြုလုပ်နိူင်ပါ။ When URL သည်လိင်ကစားစရာဆိုင်သို့ပြန်သွားသည်သူက“ ညစ်ညမ်းသောတက်ကြွလှုပ်ရှားသူများ” တွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေသည်ဟုမှားယွင်းစွာစွပ်စွဲကာဤအဖြစ်အပျက်ကိုရဲအားသတင်းပို့သည်။
ဒေါက်တာ Defamation ရဲ့ယခင် site ကို span-lab.com ယခုခေါ်ဝေါ်သောလိင်ကစားစရာ ၀ က်ဘ်ဆိုက်သို့ redirect လုပ်ပုံရသည် lovermart.com။ (Lovemart သည် Prause နှင့်တခါလုပ်ခဲ့ဖူးသော LoveHoney နှင့်ဆင်တူသည့်လိင်ကစားစရာဆိုဒ်ဖြစ်သည်။ )
လူတွေကကုန်လွန်သွားသောဝက် (ဘ်) ဆိုဒ်များမှငွေရှာရန်သက်တမ်းကုန်သွားသောဝက် (ဘ်) ဆိုဒ်များကိုသိမ်းယူလေ့ရှိသည်။ ရှင်းနေသည်မှာတစ်စုံတစ်ယောက်ကထိုသို့ထင်ခဲ့သည် span-lab.com ည့်သည်များသည်လိင်ကစားစရာများကိုစိတ်ဝင်စားလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်တည်း Prause မ လိင်ကစားစရာများကိုသုတေသနပြုသည်.
ဒီအပြောင်းအလဲကငါတို့နဲ့မပတ်သက်ဘူး ၎င်းသည်အင်တာနက်ကို ၁၀၁ ခုသာပေါင်းပြီးအရာရာတိုင်းနှင့်ပတ်သက်သောသူမ၏ပုံမှန်မဟုတ်မမှန်စွပ်စွဲမှုများဖြစ်သည်။
အထက်ပါအချက်သည်အဖြစ်အပျက်မဟုတ်သောအရာမှပေါ်ပေါက်လာသောအရာသည် Prause သည်သူမ၏သားကောင်ဖြစ်ခြင်း၏ပုံသဏ္howာန်ကိုမည်သို့ပုံဖော်သည်ကိုအကောင်းဆုံးဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။
သက်တမ်းကုန်သွားပြီဖြစ်သော Span-Lab.com URL ကိုလွန်ခဲ့သော ၆ လက (၁၁-၁၁ မှ ၂၀၂၀) ရရှိခဲ့သည်ဟု WHOIS ကဖော်ပြသည်။
Prause ကသူမရဲ့မှားယွင်းတဲ့စွပ်စွဲချက်တွေကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုပြီးနောက်သူမရဲ့ ၀ တ်ပြုသူ ၂ ယောက်ကသူမရဲ့ချည်ကိုတွစ်တာတွစ်တာနဲ့တင်ပြီးသူမရဲ့ရယ်စရာပြောဆိုချက်ကိုထပ်မံပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
ဤသည်မှာ Prause သည်သူမ၏တွစ်တာမှ ဦး နှောက်နောက်လိုက်များအားသားကောင်ဘဝ၏အယောင်ဆောင်မှုများကိုဖြန့်ရန်လှည့်စားခြင်း၏နောက်ထပ်ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။ အောက်ပါကာတွန်းသည်ဤဒရာမာဇာတ်လမ်းကိုအပြည့်အဝဖမ်းယူနိုင်ခဲ့သည်။
၂၀၂၁ ခုနှစ်မတ်လတွင်၊ Prause ၏ဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်ရေးတွစ်တာအကောင့် (@NicoleRPrause) “ အကြမ်းဖက်ခြိမ်းခြောက်မှုများ” ပြုလုပ်ခြင်းအတွက်ယာယီရပ်ဆိုင်းခဲ့သည်။ ပြန်လည်ထည့်သွင်းပြီးသည့်နောက် Prause က Twitter အကောင့်မြောက်မြားစွာကိုအကြမ်းဖက်ခြိမ်းခြောက်မှုများပြုလုပ်ရန်တွစ်တာသို့မဟုတ်မမှန်သတင်းပို့သည်ဟုစွပ်စွဲခဲ့သည်။ သို့သော် Twitter ကမည်သူမည်ဝါအစီရင်ခံသည်ကိုမည်သူမျှထုတ်ဖော်ပြောကြားခြင်းမရှိသည့်အတွက် Twitter ကမည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်ကို Prause ကသူမကိုမည်သူမသိကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
သူနှင့်ဆက်နွယ်သောဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်ခြင်းသည် Prause နှင့်စတင်ခဲ့သည် အောက်မှာ tweetingaယောက်ျားရဲ့ကနျြးမာရေး ဆောင်းပါး ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာအသုံးပြုခြင်း၏ဆိုးကျိုးများအကြောင်း။ ဆောင်းပါးကကျွန်တော့်ကိုဖော်ပြပြီးတဲ့နောက်၊ ဥပမာအားဖြင့်၊ သူမမှာအောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့သူမရဲ့ tweets ၈ ခုထဲကတစ်ခုပါ ယောက်ျားရဲ့ကနျြးမာရေး တွစ်တာ။ ကျွန်ုပ်မှမည်သည့်အမျိုးသမီးကမှဥပဒေစိုးမိုးရေးကာကွယ်မှုကိုမရယူခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်သည်။ Prause သည်လိမ်လည်မှုကိုတားမြစ်သည့်အမိန့်ကိုတင်ခဲ့သည်၊ တရားစွဲဆိုမှုအောင်ပွဲခံသူမကသူမကိုဖော်ထုတ်.
ငါသူမရဲ့ဒဏ်disputeာရီကိုအငြင်းပွားနေတယ်။ ပြီးတော့သူမမှာသက်သေအထောက်အထားတွေမတွေ့ရဘူး။ ဒါပေမယ့်ဒီအပိုင်းက Staci Sprout အကြောင်းပါ။ ဒါကြောင့် Prause's ကိုကျွန်တော်တို့ဖြေရှင်းသွားမှာပါ အခြား မုသာစကား။
ထို့နောက် Staci သည် Prause ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုကို“ ဖုံးကွယ်ရန်” ကြိုးစားသည်ဟုမှားယွင်းစွာပြောဆိုခဲ့သည်။ (မှတ်ချက် - YBOP တွင်တင်ထားသောလိပ်စာတစ်ခုတွင်သူမတိုက်ခိုက်ခံရမှုနှင့် ပတ်သက်၍ သူမချီးမွမ်းခဲ့သည်).
Prause က Staci ကသူမကိုတွစ်တာကိုတိုင်ကြားခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်သက်သေမရှိဘူး၊ Prause သည် Laila Mickelwait နှင့်ကျွန်ုပ်နှစ် ဦး စလုံးသည်သူမအားတိုင်ကြားခဲ့သော်လည်းယခင်ကသက်သေမပြခဲ့ပါ။
ထို့နောက် Prause သည် ၂ လသက်တမ်းရှိ Sprout ၏သတ္တုတူးဖော်ရေးပြန်ပို့မှုတွင် Twitter သည် Prause အကောင့်ကိုဆိုင်းငံ့ထားကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။ သူမ၏ယာယီတွစ်တာတားမြစ်ချက်ကိုရာဇ ၀ တ်မှုအစီရင်ခံစာအဖြစ်ဖော်ပြခဲ့သည်။ သူမသည် Staci Sprout နှင့်ပတ်သက်သောသူမ၏သေးငယ်သောတောင်းဆိုမှုများအတွက်တရားစွဲဆိုထားသည်။
အမှန်တရားကိုဖော်ပြရန်မှာအသရေပျက်ခြင်းမဟုတ်ပါ။ Prause ကိုတွစ်တာမှဆိုင်းငံ့ထားသည် (Prause ၏မကောင်းသောတွစ်တာပို့စ်များသည်ခေတ္တရပ်ဆိုင်းခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည့်အကြောင်းအရင်းကိုသူမမသိသောကြောင့် Sprout သည်မည်သည့်အကြောင်းကြောင့်မျှပြောဆိုခြင်းမရှိပါ)
အောက်ပါတွစ်တာတွင် Prause ၏လိမ်လည်မှုနှစ်ခုရှိသည်။ (၁) Staci သည် Prause အားတိုက်ခိုက်ခြင်းမခံခဲ့ရကြောင်းနှင့် (၂) Staci သည် Prause ၏လိပ်စာကိုဘယ်တော့မှမဖော်ပြခဲ့ပါ။ဘယ်သူမှမရှိဘူး).
တုံ့ပြန်နေစဉ် ရေဗက္ကာ Watson ရဲ့ထောက်ခံသူတွေ Prause သည်သူမ၏ Staci Sprout ကိုဆန့်ကျင်သည့်သူမ၏အန္တရာယ်ရှိသောအသေးစားတောင်းဆိုမှုဆိုင်ရာဝတ်စုံကိုမျက်နှာပြင်ပုံတစ်ပုံဖြင့်ကျပန်းတင်ခဲ့သည်။ သူမသည်ယခင်ဝတ်စုံများကဲ့သို့ပင်အရှက်ရလိမ့်မည်။
Watson ကိုတုန့်ပြန်ပေမယ့်သူမရဲ့သေးငယ်တဲ့တောင်းဆိုမှုသက်သေအထောက်အထားတွေကို Sprout နဲ့တင်ထားတယ်။
Prause သည် Sprout ကိုစွဲလမ်းနေသည်။
ဇန်နဝါရီ ၂၄ ရက်၊ ၂၀၁၈ - Prause သည်ဝါရှင်တန်ပြည်နယ်သို့ကုထုံးဆရာ Staci Sprout အားအကြောင်းမဲ့တိုင်ကြားမှုများကိုတင်သွင်းသည် (အပိုင်းတွင်အသရေဖျက်မှုနှင့်နှောင့်ယှက်မှုများစွာပါဝင်သည်) ။
အခြားသူများ - ၂၀၂၀၊ ဖေဖော်ဝါရီ၊ မတ်လ။ Prause သည်ကယ်လီဖိုးနီးယားရှိကုထုံးပညာရှင် Staci Sprout အားတရားစွဲဆိုခြင်းမရှိသောအခြေအမြစ်မရှိသောတရားစွဲဆိုမှု။
၂၀၂၀၊ ဖေဖော်ဝါရီ၊ Prause သည်လိမ်လည်မှုများစွာကိုတွစ်တာတွင် (၁) YBOP တွင်သူမ၏လိပ်စာပေါ်လာသည်၊ (၂) CA ရှေ့နေချုပ်သည် Linode အား YBOP မှလိပ်စာဖယ်ရှားရန်အတင်းအကျပ်ပြုသည်၊ (၃) Staci Sprout & Gary Wilson မှသူမ၏နေအိမ်လိပ်စာကိုတင်နေသည်။ “ အွန်လိုင်း” ။
အခြားသူများ - ၂၀၂၀၊ ဇူလိုင်။ @BrainOnPorn (Prause) သည် Staci Sprout ကို RealYourBrainOnPorn မှသုတေသီများကကလေးများအားစော်ကားသည်ဟုမဟုတ်မမှန်စွပ်စွဲပြောကြားခဲ့သည်။
အခြားသူများ - ၂၀၂၀၊ ဇူလိုင်။ @BrainOnPorn (Prause) သည် Staci Sprout အားလူမှုရေးလုပ်သားများအမျိုးသားအသင်းနှင့် ၀ ါရှင်တန်ပြည်နယ်သို့အစီရင်ခံရန် (Staci ၏လိုင်စင်နံပါတ်ကိုတရားမဝင်တင်ပို့ခြင်း) အားနောက်လိုက်များအားတိုက်တွန်းခဲ့သည်။
အခြားသူများ - ဆက်လက်၍ - Prause သည်ကုထုံးဆရာ Staci Sprout ကို“ အမျိုးသမီးများအားသတ်ဖြတ်ရန်ထောက်ခံခြင်း၊ ”“ သေခြင်းခြိမ်းခြောက်မှုများကိုထောက်ပံ့ခြင်း၊ ”“ အကြမ်းဖက်မှုကိုလှုံ့ဆော်ခြင်း၊ ”“ အမျိုးသမီးများကိုခြိမ်းခြောက်ခြင်း၊ စသည်တို့ကို "misogyny, etc"
အခြားသူများ - ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော - Prause (@BrainOnPorn) သည်ကုထုံးဆရာ Staci Sprout ကိုလိင်တူချစ်သူများအားဆန့်ကျင်။ လိင်တူချစ်သူများကိုထောက်ပံ့သည်၊ လိင်သည်ယောက်ျားမဟုတ်သူအမျိုးသမီးများအကြားသာဖြစ်သင့်သည်ဟုမှားယွင်းစွာစွပ်စွဲသည်။
အခြားသူများ - ၂၀၂၁ မေ၊ Prause သည်ကုထုံးဆရာ Staci Sprout ကို (၁) မှမည်သည့်အခါကမျှတိုက်ခိုက်ခြင်းမခံခဲ့ရကြောင်းနှင့် (၂) Prause ကသူမအားစော်ကားသည်ဟုစွပ်စွဲသည့်ဓာတ်ခွဲခန်းလိပ်စာကိုဖြန့်ဝေခဲ့သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
နောက်တစ်ကြိမ် Prause က Staci Sprout ကိုရှုတ်ချပြီး၊
Staci Prause စော်ကားဘယ်တော့မှမခံခဲ့ရကြောင်းပြန်လည်ထုတ်ဝေခဲ့သည်
Staci သည် Lab လိပ်စာကိုဖြန့်ဝေခဲ့သည်
Prause Sprout သည်မည်သည့်အရာကိုမဆိုလုပ်နေကြောင်းအထောက်အထားမပြပါ။ ၎င်းအစား Prause သည်ကျွန်ုပ်တို့၏မိတ်ဆက်ခြင်းမှစာကြောင်းနှစ်ခုပါသောဖန်သားပြင်ကိုတင်သည်။ ၎င်းသည်သူမ၏လိပ်စာသည် YBOP တွင်နေရာချခြင်းဖြစ်သည်ဟုမှန်ကန်ကြောင်းဖော်ပြသည်။
လပေါင်းများစွာသူမလိပ်စာသည် YBOP တွင်ရှိသည်ဟုလိမ်ပြောပြီးနောက်တွင်သူမကသက်သေအထောက်အထားများတင်ပြရန်တောင်းဆိုသည်။ နောက်ဆုံးတွင် Prause သည် (ဆန်ဖရန်စစ္စကို၏မြောက်ဘက်မိုင် ၁၀၀) ရှိကယ်လီဖိုးနီးယား၊
Prause လည်းဒီ Tweet လုပ်ခဲ့ဂယ်ရီ Wilson သည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်မေလ ၂၀ ရက်တွင်ကွယ်လွန်ခဲ့သည်ဒါကြောင့်ဒီစာမျက်နှာကိုမဖြည့်ဘူး]